ko htike's prosaic collection: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူများ စုဝေး
(ကောင်းကြသေးရဲ့ လား ဆောင်းပါး အဆက်)
Shame on you Nga Mg! After reading your comment, I remember ပတ္တမြား ရွှေ ဂူ poem.Our lady is ပတ္တမြား ရွှေ ဂူ .
ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်စစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ ကျနော် မောင်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး ကိုးကွယ်မှုတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အမျိုးသားရေး သက်သက်ကိုသာ လက်ကိုင်ထားလျက် ရေးသား၊ ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
Military dog wrote above comment. He just bite the bone that threw by killer Than Shwe. Burma can't move forward with this military dog and his mind set.
မင်းကို ရပတ်ဂျွမ်းနဲ့ လိုးပစ်လိုက်မယ် ကွ
ဒေါ်စုကမူမမှန်ဘူးဆိုရင် မောင်ဆွေမျိုးတွေကို တက်လိုး နေတဲ့ဗိုလ်ရူးတွေကရော မူမှန်လို့ လား စဉ်းစားနော်
ဗမာပြည်ဖာဖြစ်သွားတာ ဒေါ်စုကြောင့်လား[ ၃နဲ့ ၎ကို တောင်မှန်အောင်မပေါင်းနိုင်တဲ့ခင်များပခွေးတွေကြောင့် လားဆို တာ အိမ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ဦးမောင်
အဖြေရှာမတွေ့ ၇င်တော့ငါ့လီးကိုသာလာ စုပ်ပေတော့
မောင်ဆိုတဲ့ အကောင်...မင်းဟာ NLD ထဲမှာဝင်ပြီး undercover ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါ ထည့်ပြောပါလား။ လူတွေကို အခုလို နည်းနဲ့ ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ရမယ်လို့ ထင်သလား။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေတိုင်းမှာ ဖြေရှင်းစရာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိပြီးသား။ ဒေါ်စု က အလကားနေရင်း နေရာတကာ ဆရာလိုက်လုပ်တတ်တဲ့ လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သန်း ၅၀ ကျော်ပြည်သူလူထု ရဲ့ သန်း ၅၀ ကျော် ဦးနှောက်တွေ နဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး မှ အားလုံးသဘောတူညီပြီး ခေါင်းဆောင်တင် မြောက်ထားတာ။ ပြည်သူလူထု ကို သေနတ်ပြောင်းဝမှာ တေ့ထားပြီး ခေါင်းဆောင်လုပ်နေ တဲ့သူမျိူး မဟုတ်ဘူး။
အနောက်မျှော်၊ အနောက် အားကိုး၊ အနောက် ရုပ်သေး၊
ဒေါ်စုနှင့် ဒေါ်စုကဲ့သို့ သော အလားတူ မျိုးဖျက်၊ သစ္စာ ဖောက်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်သော အခါမှ လူရာ
မ၀င်တော့ပါ၊ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာလည်း အရွေးခြယ် ခံခွင့် မရှိကြတော့ပါ၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ စိတ္တဇ ရောဂါ အဆင့်မှာသာ ရှိပါတော့တယ် ခင်ဗျာ။
ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့လို့ ၊ တခဲနက် အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ဥပဒေ အချို့ ကို ဖတ်ကြည့် ပါခင်ဗျာ။ တပ်မတော်ကဲ့သို့မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ခေါင်း ဆောင်ကြီးများ ရဲ့ ဥပဒေပါခင်ဗျာ၊ နားလည် အောင် ကြိုးစား ဖတ်ကြည့်ပါ။
(i) is under any acknowledgement of allegiance or adherence toaforeign Power, or isasubject or citizen or entitled to the rights and privileges ofasubject oracitizen ofaforeign Power; or...
အဲဒါ ထက်ရှင်းတာ မရှိပါခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျားသေ ဒေါ်စုကို အသက်သွင်းဘို့ကြိုးစားနေသူများ အသိ တရား တိုးပွါးနိုင်ကြပါစေ ဟူ၍သာ....
(e) shall beaperson who has resided continuously in the Union for at least 20 years up to the time of his election as President;
or their spouses not owe allegiance toaforeign power, not be subject ofaforeign power or citizen ofaforeign country. They shall not be persons entitled to enjoy the rights and privileges ofasubject ofaforeign government
ဒါကတော့ ၂၀၀၈ constitution ကပါ ခင်ဗျာ။
ဒါလောက်ဆိုရင် အနောက်မျှော် ဒေါ်စု နှင့် အလားတူ သူများ အရှေ့ မှာလည်း နေရာမရှိ၊ အနောက် နိုင်ငံ တွေမှာလည်း ၀ိုင်းပယ် ခံထားရတယ်ဆိုတာ ထင်ရှား ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သူတို့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒေါ်စုလို ပုဂ္ဂိုလ်များ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ဆိုင်ရာဥပဒေတွေ နဲ့ တားမြစ်ထားလို့ ပဲ ခင်ဗျာ။
မိဘ စကားကို နားမထောင်ပဲ၊ အမျိုးသားရေး သစ္စာ ဖောက်ပြီး၊ ထင်ရာစိုင်း ရိုင်းခဲ့တဲ့ ဒေါ်စု ခုတော့ဖြင့် အရူး မီးဝိုင်း ဖြစ်ရချေပြီတကား။
အထူးဆန်းဆုံး အပြုံး မျက်နှာလို့ ပြောရလောက်
်အောင်ပဲ ဒေါ်စုရဲ့ ဘ၀မှာ Michael, David, William and so on ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့သာ ပါဝင်ပတ် သက်နေတာကို တွေ့ ရတယ်၊ မြန်မာ ယောက်ျားနာမည် ဆိုလို့သူမရဲ့ ဘ၀မှာ မူးလို့ တောင် ရှူစရာ မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်လေ။ မြန်မာမျိုးချစ်ကြီးတဲ့လားဗျာ၊
ကျနော် ပြုးံမိသေးတယ်။ သူမက ထူးဆန်းနေလို့ ပါ။
The group that support killer Than Shwe is just organize by killers and there is onlyaspace for them. This is hell where they have to stay. That isaspace that they have to serve for their sin for killing people.
I supprot 'maung'... no place for her in our country....
DASSK joined politics not because she wanted ministerial office nor to become famous. She chose to live asasimple housewife minding her own business... The 'Mass Killings of students' and demonstartors in 1988, the chaotic situation after BSPP government breaks up and most importantly, the peoples' persuation requested her "Leadership" , which finally made her join Burmese politics. Unfortunately, this cost the lost of her dearest family.
She is intelligent enough to understand that this terrible fate was coming ....but once she has given her 'promise' to the young democracy freedom fighters she will NEVER BETRAY her comrades.It is her "Promise For Life".
I only wish the Military leaders of Burma (Ne Win , Than Shwe) 'The Liars' were like DASSK and keep their promises they gave to Burmese People infront of the World.
After all, there always be "People of Burma" but.... the dictators like Ne Win and Than Shwe will fade away into "nothingness" . This much the generals should understand if they know the slightest about Buddhism.
အယုတ်တမာခွေးအိုကြီးအား စိတ်ယုတ်ခြင်းတူသူ စစ်ခွေးငတုံး အခွင့်ရေးသမားများ ထောက်ခံကြသည်။
သာဓုခေါ် ကျေနပ်နေမှာ သေချာပါတယ် …။)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့ အမျိုးသားရေး တရားတော်ကို မလိုက်နာနိုင်တဲ့ ဒေါ်စု ကို အမေခေါ်သူတိုင်းဟာ ကိုယ့်မိခင်အရင်းကို လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား တစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးမယား အဖြစ်ကို ရောက်အောင် ပို့ ပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာစစ်စစ် အမေများ အားလုံးကို လေးစားသော။ ဂုဏ်ပြုသော၊ ဦးညွတ်သောအားဖြင့် ဒေါ်စုကို ဘယ်သော အခါမှ အမေလို့မခေါ်မိကြပါစေနဲ့ ခင်ဗျာ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒေါ်စုသည် ဗုဒ္ဓဟောကြား ထားသော စောင့်လေမျိုးနွယ် (ကုလ၀ံသော စိရံ ဌတွာ) ဆိုတဲ့အမျိုးသားရေးကို သစ္စာဖောက်ထားသူဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ကို အသက်နဲ့၊ အရှက် နဲ့ ထပ်တူ စောင့်ထိန်းနေကြတဲ့မြန်မာမျိုးချစ် မိခင်များကို လေးစား၊ ဦးညွတ၊်ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဒေါ်စုကို နိုင်ငံခြားသူမြန်မာ သို့ မဟုတ် တပြည်သူ မရွှေထား လို့ခေါ်တာဟာ အသင့်တော်ဆုးံပါ ခင်ဗျာ။
သူ မရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းအရာတွေကိုက ဒီလို ဖြစ်နေလို့မလွှဲ မရှောင်သာ ရေးသားဖော်ပြ လိုက်ရ တာကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသော်လည်း ဒီစကားတွေက သာလျှင် သူမအတွက် အထိုက်တန် ဆုံးဖြစ်နေလို့ 
သက်သက်ညှာညှာ သုံးလိုက်တာပါ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျာ့။
In joint USAF-Luftwaffe exercises, the MiG-29 that the Luftwaffe fielded defeated the F-16 in close combat almost every time using its highly practical IRST sensor and helmet mounted display, together with the Vympel R-73 (NATO: AA-11 'Archer') missile
The Federation of American Scientists claims the MiG-29 is equal or better than the F-15C and in some areas such as short aerial engagements because of the Helmet Mounted Weapons Sight (HMS) and better maneuverability at slow speeds. This was demonstrated when MiG-29s of the German Luftwaffe participated in joint DACT exercises with U.S. fighters.[42
မြေမှာလာပြီအုပ်ခူပ်စေချင်တဲ့ကျွှန်စိတ်ဓါတ်နဲ့။ Willian yakhtaw မဖိတ်ပဲရောက်လာပင်မဲ့ ကိုယ်ဖိတ်ထားလူအတိုင်းဆက်ဆံကတည်းကမင်းတို့
Hell isaspace for military dogs who kill the people and destroy Burma into poorest country in the world. There is no other suchaplace for them.
What A shame but I am not suprise people like this person "Maung" will never able to see the reality about our own country because he think he got some favour from Than Shwe. By observing his post probably he is currently or recently trained asapilot or cadet in Russia and he think it isabig favour from Than Shwe. He talked about Daw Su married to Foreigner but he didn't mentioned about Than Shwe daughter who already had3month pregnancy when she got married and without knowing who is the father of the baby. Remember if you point finger to others there are4of your own fingers pointed back to you. If you are reallyaBuddhist, let me tell you one thing, in Buddhism, Nothing is Permanent, so one day all of you will fall and fall badly because all of you are monks killers.
I am no suprise of all the comment you posted here because all of you didn't mind killing monks and these kind of people will only make comment like these.
One another thing is I feel pity for all of you who support Than Shwe and his followers because noone visite their website so they have to come and post all these stupid things in Ko Htike site. This shows which sites people believe and Trust.
ကိုစားနေတာ...ဒီမိုတွေတကဲ့ဆောက်ရှူးတွေ သူတို့လုပ်တာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ ထောက်ခံရမဲ့ပုံစံ...ဒီလိုလူတန်းစာတွေ တိုင်းပြည်အုပ်ခူပ်လိုကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်
အဲဒီအထဲမှာထိပ်ဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ် ၂၀ လုံးလုံး ချီးထုတ်ဖြစ်နေတဲ့
25 December 2009 at 20:09
Your mercenary army ( not fit to call as Tatmadaw which is not the same army as BIA/BDA/BNA which was founded by the General Aung San) worshiped Ne Win and his Family likeaGod last time, then look what happened to Ne Win and Family(who use to use country money like their own mney) and how your mercenary army treat to them now, after that your mercenary Army then worship Saw Maung, he got insane drunken(because of all his sins) and your mercenary army neglect him and he died like nobody.Then S1 Khin Nyunt, all your mecenary Army worshipped him likeaHero and now what happened to him and how you treat to him and his associates. Then look at S2 Tin Oo how he died and what happen to his family because of all the sins, he died that way.
What I wnat to poinout is "You like to critised DASSK ၂။ တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်သွားခြင်း but just look at the recent our country History, just look back 21yrs ago. The leaders of the mercenary junta army which you admired are the ones who betray the country. Look at the original coup d'etat (na _wa Ta) leaders(just 21 yrs ago), Most of them are now "Officially" charged with corruption or Treason.
Just within 26years of Ma-sa-la and 21 yrs of your current Junta(total of 46 yrs) your mercenary army leaders are the one who corrupted and steal the country money, one after another. They are the one who betray the country. This is the fact otherwise they are/were not charged with corruption and treason.
Your junta army leaders are the one who digraced the country name because of their corruption our country is now known as one of the poorest and one of the most corrupted country in the world.(Don't talk about sanction there is nothing to do with sanction)(Since you hate western country why you bother about sanction..right?)
Where are the Billions of dollars money which the country should get from Natural Gas which was sold to China, India, Thailand and Singapore?? Then Why our country and countryman are still poor?(not the generals and the junta army leaders) even though there are billion of dollars of revenue earning from natural Gas every year.
Since you are good at analyse please analyse for this situation why our country is poor eventhough earn billion of dollars from natural Gas.
(Don't say because of DASSK, she can't do anything because she was surrounded and gurded by your junta army.) But funny thing is eventhough you are potraying how good is the junta army, how come this amercian able to go inside DASSK compound surrounded by the junta soldiers. Please tell me how could this american able to go inside the compound. Bad management? Indicipline of the junta Army? Conspiracy of the junta leaders? Inefficiency of the junta agents?
So instead of critise and analyse the 60yr old woman who was under house arrest for so many years and surrounded by the entire Army, you should better analyse the actual situation of our country why its become so poor and why the generals become so rich(don't denied this you know, I know eevryone know they are rich).
If you say the countryn is poor because of DASSK, THEN THINK CAREFULLY, IF this 60 yrs old women who was STILL underhouse arrest for so many years and surrounded by the junta army is able to do this, THEN you are ADMITTING that this 60yrs old woman is more capable than ALL your generals(who have power and guns for their personal use). So Think carefully before you accuse anyone.
Simpleman, are you talking about yourself? :)
Sorry Simpleman. after 2010 election there will be no more နအဖ, They are defunct, GONE, become Dinosaurs..EXTINCT. So I don't need to walk on the road lay by နအဖ in future.
Currently, I don't even walk on the နအဖ road. I do my own DECENT business and no need to steal from the country. I pay my country, the income tax with my own income/my own money. Do you pay any income tax?
အတိအကျဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ
တော့ run ရမှာတော့သေခြာတယ်။
(Look at the original coup d'etat (na _wa Ta) leaders(just 21 yrs ago), Most of them are now "Officially" charged with corruption or Treason.)
Yeah, Bay Dah, you seem improving your views on Myanmar. You know why? It is because Myanmar isacountry where the rule of law prevails and it isapart of discipline democracy. After all, no one is above the law. Remember, we believe in Kamma. You will be paying your own price for betraying the country just like Daw Aris (aka) Daw Suu.
26 December 2009 at 17:39
မောင်ဆိုတဲ့ကောင် မင်းထမင်းစားတဲ့လူဆိုရင် တော့ တရားတာမတရားတာလောက်တော့စဉ်းစားတတ်မှာပါ ပိုက်ဆံလေးတပဲခြောက်ပြားရရုံနဲ့တော့ စစ်အာဏာနာရူးတွေရဲ့ ချီးစားခွေး အဖြစ်မခံပါနဲ့ကွာ
(After all, no one is above the law. )
@Maung, I take this as, your admission of the junta generals were corrupted. You also seem improving your views on the truth about junta.
But why people like you(who goes around blog site like this and comment about DASSK) are keep quiet when these corrupted generals were in power? You didn't dare to sayasingle word about the corruption of these generals that time. But if you admit that you have to afraid for the NEAREST Sword, then I forgive you.
I am quite sure after very near future you will going to admit about the corruption of the recent generals who are in power and you don't need to wait long to tell the truth because their(the recents general in power) one leg is already in the grave.
(Remember, we believe in Kamma. You will be paying your own price for betraying the country)
I am quite sure you mean this for those corrupted generals. For me, MY Conscience is very CLEAR, I never betray my country, I never stealasingle cent from my country, I never kill my fellow countryman and most of all I never insult and kill the Sangha.(Monks) so I am not afraid for my Kamma. After all, The generals and fellow bloggers like you can lie and cheat to us, our countrymen and the whole world but you cannnot able to lie to Buddha so when all of you die you know yourself which place you have to go.
But I am quite satisfied now, you finally admit your junta generals are corrupted.
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလိုက်ဖတ်ပြီးမငြင်းချင်ပါဘူး.. အချိန်ကုန်လို့ .. တခုပဲသိတယ်.. အာဏာအတွက် သံဃာပါမကျန်သတ်တဲ့ အယုတ်တမာကြီးအား.. စိတ်ယုတ်ချင်းတူသူများ ကူညီပြီးအလုပ်လုပ်ပေးကြသည်။ မင်းတို့ လဲ အဲဒီခွေးအိုကြီးနဲ့ ထပ်တူ ကုသိုလ်တွေရပါတယ်.. ဆက်လုပ်ကြပါ။
အသိဥာဏ်ရှိရှိအများအကျိုးအတွက် သံဃာသတ်.. ကျောင်းသားသတ်.. ပြည်သူသတ်.. ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဗုံးလျှောက်ခွဲ.. နာဂစ်မှာ ဆောက်ကျင့်ယုတ်တာလဲ နိုင်ငံတကာအသိ.. အနှစ်၂၀ကျော်ပြီ မီးတောင် မှန်အောင်လာအောင်မလုပ်နိုင်.. တော်တော်ဥာဏ်ရှိတဲ့ န.အ.ဖ နဲ့ငတုံးနောက်လိုက်တွေ.. မင်းတို့ ဝါဒဖြန့်တာတွေ မြန်မာပြည်က တဘတ်သက် သတင်းစာမှာပဲ သွားလုပ်ပါကွာ.. အရိုးလေးကိုက်ပြီး ဒီမှာလာဟောင်မနေနဲ့ .. လက်ပဲညောင်းမယ်.. ဘယ်သူမှမယုံဘူး..
ပြောရင်းနဲ့Simple man ဆိုတဲ့ ငတုံးတောင် သဘောပေါက်လာပြီ..
အရိုးအရင်းလေးကိုက်ရဖို့တပြည်လုံးကို နှိပ်စက်ဒုက္ခ
ပေးနေတဲ့ အယုတ်တမာအဖွဲ့ အတွက် အလုပ်လုပ်ရမှ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ ကိုယ်ဘ၀ကိုယ်သနား..
တစ်ဘ၀ကောင်းစားရေးသမား ဘ၀ကမှ လွတ်အောင်မရုန်းနိုင်ရင် သံသရာမှာ အပါယ်လေးပုံက လွတ်ဖို့ လမ်းမမြင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက် ..
အကုသိုလ်နဲ့ အသက်မွေးရတာကိုက အတိတ်က အကုသိုလ်ကြီးခဲ့လို့ ဆိုတာရော နားလည်ရဲ့ လား..
ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်သိ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိ တယ်ဆိုရင်ပဲ ပညာရှိလို့ ခေါ်လို့ ရပါတယ်.. ငတုံးတွေရယ်
ပြောနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုတောင်ထမင်းနှပ်မှန်ရဲ့လားမသိဘူး။ ငါတိုကတော့ကိုပညာနဲ့ကိုယ် နိုင်ငံခြားမှာအေးဆေးပ။
Simple man Profile ကို ကြည့် ပါ။ ဒီ ဇင် ဘာ လ ၂၀၀၉(On Blogger since December 2009) က မှ ဘလောက် ကာ ဖြစ် တာ။ ပြော တော့"ငါ လည်း ကိုယ့်ပညာ ကို နိူင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေ" ခါ တော် မှီ ရောင် တော် ပြန် ကြီး ၊ တော် တော် ရီ ရ ပါ လား ။ လိမ် ဆင် ကြီး ပေါ် သွား ပြီ။ မောင် ဆို တဲ့ ကောင် နဲ့တ ယောက် တည်း ဘဲ ဖြစ် မှာ ။
ဒေါ်စုတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်သင့်လား မသင့်လား တော့မသိဘူး။၂၀၁၀နောက်တော့လိုက်ရမယ်။ဒါဆိုဒေါ်စု
ဒှေါစုက ၂၀၁ဝကိုလိုက်ရမလား မလိုက်ရမလားတော့မသိဘူး။ ဗိုလ်သန်းရွှေတော့ သူ့လမ်းကြောင်းသူသွားဖို့ကို ဒှေါစုနဲ့ NLDမပါရင် legitimacy မရမှာကြောက်လို့ သူတခါမှမလုပ်ဖူးတာတွေ အလျှော့ပေးစီစဉ်၊ တဖက်ကလဲ ကုလားအုပ်ခေါင်းပေးဝင်ရင်း ကိုယ်ကြီးပါဝင်လာမလားတွေးစိုးရိမ်ပြီး ကုလားအုပ်ခေါင်းလဲမြင်ချင် သူ့နေရာပျောက်မှာစိုးလို့ ကိုယ်ကြီးမှာဝင်လာမှာလဲကြောက်နဲ့။ အဲဒီအကြောင်း တကမဿဘာလုံးကလဲသိလို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇတ်ထုတ်တခုကြည့်ကြသလို ကြည့်နေကြလေရဲ့။
လုံးဝ space ပျောက်သွားမလားလို့ အချုပ်ချထားသူကလဲ မရ ရတဲ့ကြားက Space ကိုရအောင်ရှာထွက်တတ်လေပေတော့... လမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်ကြာကြာချုပ်ထားနိုင်ရင် လွှတ်ပေးလိုက်လဲ မလျှောက်တတ်တော့ပဲနေမလားလို့ ခပ်တိမ်တိမ်တွေးထားသူများအတွက် အခက်ပေါ့.. ဟားဟားဟား
ကို Nanda ပြောတာ Simple manဆိုတဲ့ ငတုံးနားလည်ပါ့မလား...
သူတို့ ခင်မျာဘာမှန်းမသိပဲ အထက်က အယုတ်တကာ အယုတ်ကောင် ဗိုလ်သန်းရွှေက ဒေါ်စုရေးထားတဲ့ စာကို မပြန်ရဲ လို့လူတွေကို အာရုံပြောင်းအောင် ဒေါ်စုမကောင်းကြောင်း ယောက်ကျားရင့်မာတွေ တန်ရဲ့ ဖာသည်တစ်ယောက်လို အပုတ်ချအတင်းချ နေကြလေရဲ့ ..
ဖာသည်မတောင် ဖာသည်မတိုင်း သူတို့ လို မယုတ်ကြပါဘူး..
မိန်းမတယောက်ကို ဥာဏ်ရည် နှလုံးရည်ချင်း မယှဉ်နိုင်တော့ အပုတ်ချနေကြတဲ့ ငတုံး များ(ဖာသည်မသားများဟုထင်ပါသည်)။ ထမင်းတလုပ်အတွက် ယုတ်နေကြတာကြည့်ကြပါ။
30 December 2009 at 03:16
Simple man နဝတ ထွန်း ကြည် တို့၊ ခင် ညွန့်တို့ လဘ် စား နေ တုံး က မင်း တို့ကောင် တွေ ဘယ် ချောင် သွား ပြီး ငြိမ် နေ ကြ သ လဲ။ ကို ဗေ ဒါ ပြော သ လို ၊ မင်း တို့ပါး စပ် ပေါက် တွေ က ပိတ် နေ ကြ ပါ လား။ မောင် ဆို တဲ့ကောင် က တော့၊ မင်း တို့ဗိုလ် ပြုတ် တွေ ခိုး တာ ဝန် ခံ သွား ပြီ၊ ၊ အ ခု တော့ ခင် ညွန့်တို တော် ကြောင်း မ ပြော တော့ ပါ လား ။ မင်း ကော ဗီုလ် သန်း ရွှေ နဲ့ မိ သား စု လဘ် စား တာ ဘယ် တော့ ဝန် ခံ မ လဲ။ ဗီုလ် သန်း ရွှေ သေ မှ ဘဲ ပြော ရဲ မဲ့ ကောင် တွေ ၊ ပြီး တော့ နောက် တက် ဓဲ့ လူ ကို ဘု ရား လို ကိုး ကွယ် အုံး မယ်။
ခင် ညွန့် ကို ဘု ရား မှတ် လို့ ၊ ကြေး စား တပ် က ကိုး ကွယ် မိ၊
ခြ ထွက် မှ ထောင် ပို့ မှန်း သိ၊
ကြေး စား တပ် ရဲ့ ဖ အေ ၊ ဘု ရင် ရူး ကြီး သန်း ရွှေ
ဘာ လုပ် လို့ ဘာ လုပ် ရ ဓှန်း ဓ သိ ပါ ပေ၊
ခင် ညွန့် ရေး ခဲ့ တဲ့ လဓ်း ကြောင်း ကို လေ ၊
ယောင် ရဓ်း ကာ လှဓ်း ကာ နေ
ဆက် လျောက် လဲ အ ခက်
နောက် ဆုတ် ရင် လည်း သောက် ရှက်
သာ သ နာ ကို ဖျက်
သံ ယာ အ သက် ကို ကွပ် မျက်
ဘု ရင် ရူး ကြီး သန်း ရွှေ အ တွက်
အ ဖြေ က အ ခက် ၊ ကျပ် ကုန်း ဘက် ကို
ပြေး ကာ ထွက်
ဒုက္ခ လည်း ရောက် ၊ သေ ရ မှာ လည်း ကြောက်
နာ ဂစ် မုန် တိုင်း က နှောက်
ဘာ လုပ် လို့ ဘာ လုပ် ရ မှန်း မ သိ
ရွှေ တိ ဂုံ ပုံ တော် ၊ ခိုး ကာ ဘု ရား တည် မိ
နတ် လည်း မ ကယ် ၊ ဘု ရား လည်း မ ကယ်
သန်း ရွှေ ဘု ရင် ရူး ၊ င ရဲ လား တော့ မယ် ။
(@Maung, I take this as, your admission of the junta generals were corrupted. )
It is utter failure of your understanding about what I said " After all, no one is above the law".
Suchanarrow interpretation of context in your comment that focus on onlyaparticular group or individual show that you still need to do tons of homework on your critical thinking so that you would be able to makeafair and objective assessment. Try again to understand " No one is above the law". It is that simple and universal.
အကယ်၍သာ ဒှေါစုသည် အမျိုးအနွယ်ကို မစောင့်ထိမ်းခဲ့ရင်
သူ့သား ရွှေလှများ ဗုဒဿဒဘာသာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကိုရင်ဝတ်ဖို့ဆိုတာ လွန်ဝေးစွ…
ဒေါ်စုသည် သာ မြန်မာပြည်ကို တကယ်မချစ်ခဲ့လျင်..
သူ့ဘဝ သက်သာရာ နေသာသလို အောက်စဖုဒ် မှာအရိုးထုတ်ချိန်ထိ နေသွားမှာ..
ဒေါ်စုသည် အစ်ကိုရင်းကို အကိုကြီးအဖရာ မထားခဲ့ရင်…
၁၉၈၈ က ပြည်သူအများ အောင်ဆန်းဦးရေးတဲ့စာလို့ ထင်နေကြတာ မဟုတ်ပါလို့ ပြောပြရုံတစ်ခွန်းနဲ့… အားလုံးအမှန်ကိုသိ ဝနဿတာမိကျပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍..ဒေါ်စုသည် သကြား နဲ့ ဆား အရောင်တူသော်လည်း
ခွဲခွဲ ခြားခြား နားမလည်ခဲ့ရင် စစ်တပ်က ကမ်းတဲ့အရိုးကိုကိုက်..အရွတ်ကိုစားလို့ ဘာမဆို အဟုတ်ပါ ခေါင်းငြိမ့်မဲ့ သူဖြစ်နေအုံးမှာ..။
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည် ဘ၀ကိုမေ့ ဘဝင်တွေ မြင့်နေခဲ့ရင် ..သူရရှိတဲ့ ဆုငွေအသပြာ မြန်မာလူမျိုးများကောင်းလေရာ .. ဘာဖြစ်ဖြစ် သုံးစေဗျာရယ်လို့ ပေးထားရစ်စရာ အကြောင်းမရှိ..။
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည် လူမျိုးခြား ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင် မပြုခဲ့ပဲ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြား.. ဘာသာတရားလဲ ကိုယ်ကအစဖောက်ပြာဲး့ မှောက်မှားမယ့် တကယ့် မိစဿဆာဒိဌိ နဲ့ အကြောင်းပါခဲ့ရင်..
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည် မိဘ မျိုးရိုး အစဉ်အလာကို သစ္စာဖောက်လို့ သူ့တစ်ကိုယ်တည်း ကောင်းမှု သူရှုကာ သွားခဲ့ရင်
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည် စောင့်လေ မျိုးနွယ် ၀ံသာနုရက္ခိတ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို မျက်ကန်းဆန်ဆန် လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်...အခုလောက်ဆို ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက် သာသနာကို အမိုက်သွင်းမယ့််သူကို လက်ထပ်မိပေလိမ့်မယ် အမေ…
အကယ်၍..ဒေါ်စုသည် ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး ဆိုတဲ့ သူတို့ အှောတဲ့ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရင်...ယခုလို တိုင်းပြည်အကျိုးမျှောကိုးကာ နှစ်ဖက်အတူ တွဲယှဉ်တူ လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းမှာမဟုတ်…
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်အလုံးစုံ ပိတ်ဆို့ ရေးအလုံးစုံ ပျက်သုံးရေးအလုံးစုံ ဆန့်ကျင်ရေး အာဏာဟူသမျှ ဖီဆန်ရေး တပ်မတော်အား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး ဆို တဲ့ အဖျက်လုပ်ရပ်များကို စွန့် လွှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်....ဟိုးဟိုး .. အမယ် အမယ် သူတို့လုပ်တဲ့ မတရားမှုများကိုကျတော့ အဖျက်လုပ်ငန်းများကိုဆန့်ကျင်ရင် ဆိုပါလား.. ဟားဟား
အကယ်၍သာ တပ်မတှောသည် ပြည်သူသည်သာ အမိ ပြည်သူသည်သာ အဖ လို့ သတ်မှတ်ခါ..။ မတရားပါတီ အာဏာရရေး လက်မနှေးပဲ ကူညီလုပ်ဆောင်မပေးခဲ့ပါလျှင်။.. အကယ်၍သာ တပ်မတှောဟာ ဒိုင်လူကြီးပီပီ သမမျှတကာ တိုင်းပြည်အရေး ကောင်းဖို့တွေးပေးခဲ့လျှင် ..မည်သူကမှ ထိုအဖွဲ့အစည်း အင်အားမဲ့စေသတည်းလို့ တွေးလိမ့်မယ်မဟုတ်..။
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည် ဆုပေါင်းများစွာကို စုအကြောင်းတရားပါ..ဆိုပြီး အောက်ခြေလွတ်ကာ ရသမျှ ဆုကြေး ငါ့ဘဝကောင်းဖို့အရေးသာ သုံးတော့မယ်ဆိုပီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သွားမယ်ဆိုရင်
အကယ်၍...ဒေါ်စုသည်မြန်မာစကား ပြော မြန်မာအစား အစာတွေကို စား
မြန်မာ့လေကို ရှူ မြန်မာ အ၀တ်အထည်တွေ ၀တ်ထားသလောက် မြန်မာနိုင်ငံ့ဆုတ်ယုတ်မှု တိုင်းတပါးလောက်တောင် မသိလောက်အောင် နုံခြာဖျင်းစုတ်လှတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကတှော တစ်ယောက်လိုသာ အမှန်တရားကိုမသိခဲ့ရင်
အကယ်၍..ဒေါ်စုသည်လူမျိုးခြားဘာသာခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတို့ ရဲ့ ရင်ခွင် ဟာ ပြည်တွင်းဖြစ် ဗုဒဿဒဘာသာ၊ ချစားတဲ့သီလ သမာဓိသာ နားလည်သူ အမောင်မဆလ စစ်သည်တို့ထက် ဆပါင်းသခေဿငျ သာလွန်တဲ့ လူမျိုးခြား ပညာရှင်အဲရစ်ကို ရွေးချယ်တာ ဗိုလ်ချုပ်သာသိရင် သူ့စစ်သည်တွေသူ ခေါင်းခေါက်ကာ ဆဲလိုက်မယ့်အမျိုး အဟိုး.. ဟိုး….။
လာလာချေသေး.. ကာမဂုဏ် ယစ်ပလ္လင်မှာတဲ့..။
သူခိုးက လူလိုဟစ် ..သူ့သမီးလူလို မကျင့်နိုင်ခင်မှာ သိကဿခာရှိ သူများလင်မယား အပနာတရား သူပွားများ..။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို..ဘာကိုမှ သူအဆုံးရှုံးမခံလို့ ကျစ်ဆံမြီးနှစ်စုံ ဘယ်ညာသူချ အဲဒီအခါသမယ ကတည်းက ကျက်သရေအပြည့်ရှိခဲ့သူပါ..။ .
အကယ်၍..ဒေါ်စုသည် နိုင်ငံတော် အဏာကို ဖြတ်လမ်းက မလိုက်ခဲ့မိရင်....
(လာလေသေးရဲ့ သူ့အပြော.. သူခိုးက လူလူဟစ်တာများလှပေါ့) နိုင်ငံတှောအာဏာဆိုတာ သူ့အဘိဓါတ်မှာ သူ့အတွက် မဟုတ်.. တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့သာ သူအားထုတ်။ စကားစမြည်ပြောကာ အလုပ် တူတူလုပ်ကြရအောင်လေတဲ့…။
အကယ်၍..ဒေါ်စုသည် မျိုးချစ်တပ်မတော် နဲ့ အတူလက်တွဲ ခဲ့မယ်ဆိုရင်...( ဒီစကား သူများကို လာမပြောခင်.. မျိုးချစ်တပ်မတှော တကယ်ကိုနှော လက်နက်မပါတဲ့ ပြည်သူကို ဆှောမဆှော ကိုယ့်အာဘှောကိုယ်စောကြောကာ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်သန့်အောင်အရင် လုပ်ကြ)
အကယ်၍...စစ်တပ်ဟာ.. တိုင်းပြည်အင်အားဟာ စစ်တပ်အင်အားအစစ်မှန်ပဲဆိုတာ ကောင်းစွားသဘောပေါက်ခဲ့လျင်
"အကယ်၍ ...ဒေါ်စုသည်"ဘေးပြောတာကို မယုံဘဲ သွေးပြောတာကို ယုံခဲ့ရင်"
ပြောတာလဲ နောက်လှည့်ကြည့်ပြော..ကိုယ့်လူ။ သူ့သွေးအရင်း အကိုရင်းက ဥပဒေကိုတန်ပြန်…သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိဟန်နဲ့ အတုအမှု.. နအဖကို အကျိုးရှေးရှု.. ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ ရသမျှအမြတ်ရယ်လို့ လူ့ဘဝသိကဿခာကို ရိကဿခာနဲ့ လဲလေသူ။
ခုတော့ ရွှေမြန်မာပေါင်းတို့ ရေ...(ဟေ….) စစ်ကျွန်သာလုပ်ကြပါတော့
၂၀၁၀ မှာပေါ့..( တှောပါတော့ ကိုယ့်လူရယ်)
ဒါကြောင့်...ပြည်အရေးရယ်ထက် သူ့အရေးသူ ပိုချစ်ပါတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ တပြည်ထောင်ဖို့အရေး မျက်ကန်းလို ပြည်ချစ်ဆိုသူအများစုရယ် လိုက်ပါဖို့ မနှေး..။
အယုတ်တမာခွေးအိုကြီးအား စိတ်ယုတ်ခြင်းတူသူ စစ်ခွေးငတုံး အခွင့်ရေးသမားများ အရိုးလေးကိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်ပေးကြသည်။
တော်တော်အောင်မြင်တဲ့ န.အ.ဖ မီဒီယာ
မောင်မောင် ငတုံးတို့ကိုယ်ပြောတဲ့ စကား ကိုယ်ဖာကိုယ်ကော ယုံရဲ့ လားမေးကြည့်ကြပါဦး..
(It is utter failure of your understanding about what I said " After all, no one is above the law".)
@ Maung, Whatapin head you are. Do you ever heard about Logical Thinking?
You said "after all, noone is above the law,
which mean: your general were also not above the law and thats why they were charged with corruption and the verdict was guilty.(even with your junta kangaroo court law) Thats mean they are not above the law and they are guilty as per charged for corruption.
Very Simple logic. Even4year old child can know this logical thinking.
(so that you would be able to makeafair and objective assessment) really?? ... Do you?
By the way if you don't know how to writeapoem(ofcourse you are pin head, you only know how to repeat(likeaparrot), don't shout the same thing again and again, likeaplaying an old record. If you interest in poem, I give youaanother new poem.
သူ တို့ ဆွေ မျိုး အ ကျိုး ကို ဘဲ ကြည့် ဖို့ တတ် ၊
ပြည် သူ ကို တော့ ရန် သူ မှတ် ။
သံယာ တော် တွေ ကို အ သေ သတ်
မ ကောင်း တာ မှန် သ မျှ အ ကောင်း မှတ် ၊
ရှိ သ မျှ ကို လိမ် ပြော တတ် ။
ဗိုလ် ချုပ် အောင် ဆန်း ဖွဲ့ ခဲ့ တဲ့ မျိုး ချစ် တပ်
သန်း ရွှေ ရဲ့ဆွေ မျိုး ချစ် ကြေး စား တပ် နဲ့ တော့
ကွာ တယ် ဗျ ။
ဗိုလ် ချုပ် တပ် က တိုင်း ပြည် ချစ် တပ်
ပြည် သူ ကို ချစ် တဲ့ တပ် ၊
ပြည် သူ က လည်း ချစ် တဲ့ တပ်။
သန်း ရွှေ တပ် က ကြေး စား တပ်
သူ တို့ ဆွေ မျိုး ကို ဘဲ ချစ် တဲ့ ဓါး ပြ တပ်
အ မျိုး ကောင်း သား သမီး တွေ ကို
မ တ ရား ကျင့် တဲ့ ၊ မု ဒိန်း တပ်
ဗိုလ် ချုပ် တပ် နဲ့ သန်းရွှေ ရဲ့ အ မျိုး ချစ် ကြေး စား တပ်
ကွာ လိုက် တာ များ
နတ် သုတ္ဓာ နဲ့ ကြောင် ချီး လို့ သာ မှတ် ။
အ မျှ ၊ အ မျှ ၊ အ မျှ
her own brother asafather figure,
her anscesters and national traditions,
had been able to demonstrate
as much as she breathes in Burmese spehere and as much as she wears Burmese attire,
ိမစ်စက် စ် မိုက်ကယ် အဲရစ် ခေါ်
မရေရာတဲ့ သောင်းပြောင်း စကားတွေ နဲ့ 
ကရေကရာ ရောင်းရောင်းစားမနေပါန့ဲ ဗျာ ။
Bay Dah ရဲ့ အမှားဆုံးပဲ မဟုတ်လား။
Logic ဆိုတာ သစ္စာတရား ( truth)
Bay Dah အသေအချာ ပါနေပြီ။
Bay Dah လို လူတွေ
နေစရာ မရှိဘူးဆိုတာကော သိရဲ့လား။
Bay Dah မျောပေတော့...
31 December 2009 at 17:36
Maung ဆို တဲ့ င တုံး ကောင်
ပြော စ ရာ ဓ ရှိ တော့ ၊ ထပ် ကာ ထပ် ကာ ဟောင်
သူ ပြော တာ တွေ က ပေါ ကြောင် ကြောင်
သူ့ ဦး နှောက် က ခပ် ချောင် ချောင်
အ သား ထဲ က လောက် ထွက် တဲ့ ကောင်
သန်း ရွှေ နောက် က နေ ကာ ဟောင်
အရိုး အ ရင်း ကိုက် ရ ရင်
သံ ဃာ တောင် သတ် တဲ့ ကောင်
တ ကယ်က တော့ သုံး မ ရ တဲ့ ကောင်
င ရဲ လား မဲ့ ရှေ့ ဆုံး က Maung
@ Maung, It is waste of time, discussing peole like you. Because it is like "ကျွဲ ပါး ဆောင်း တီး" you don't understand anything at all. Thats why I give youanew poem for new year and good bye. Continue barking yourself alone.
2 January 2010 at 15:41
မင်းတို.ပထွေးအကြီး စေါမောင်က ကြီးကြပ်ပြီး၁၉၉၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားတဲ့ ရလာဒ်ဟာ စေါမောင်သေတာနဲ့ ပျောက်သွားရောလား?
ဒါဆို၂၀၁၀ ၀င်ပြိုင်နေလို.လဲ အပိုဘဲ မင်းပထွေးအငယ် ငသန်းရွှေ သေရင်လဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက ”မျောက်မျက်လှည့်ပွဲကြီး” ဖြစ်သွား အုံးမှာပဲ။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ (ခေါ်) အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင် ဖါခေါင်းတွေ အုပ်စီးတဲ့ ကြေးစါးတပ်က ဒီလိုဘဲလေ... ဖါသယ်မ ပါးစပ်လို ဒီနေ့ တမျိုး မနက်ဖန် တမျိုး။ ဘာမှ ယုံကြည်လို.မရဘူး။
were able to keep
her ancestors and national traditions,
မောင်ဆိုတဲ့ အယုတ်တမာကောင်းကြီးရဲ့ နောက်လိုက် အယုတ်တမာလေး...
ဒင်းတို့ လို အသားထဲကလောက်ထွက်တဲ့ အလိုတော်ရိတွေကြောင့် န.အ.ဖဟာ ဆက်လက်တည်မြဲနေပြီး တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ချင်းတိုင်းဖျက်.. ပြည်သူ၊ ကျောင်းသား၊ သံဃာတွေကို သတ်ချင်တိုင်းသတ် ဖမ်းချင်းတိုင်းဖမ်းလာ အနှစ်၂၀ ကျော်အတွင်းမှာ ပြည်သူထောင်ပေါင်း သောင်းပေါင်းများစွာသေ.. အဖမ်းခံရနဲ့ .. ပြည်သူသန်း၅၀ ကျော်လည်း ဆင်းရဲ အတိ ရောက်နေကြပါတယ်..
အားပေးမြောက်ပြုနေတဲ့ ဒင်းတို့ တွေလည်း အယုတ်တမာကြီးလောက် မခံစားရပေမဲ့ အယုတ်တမာကြီးနဲ့ ကုသိုလ်အတူရပါတယ်.. သာဓုခေါ်ပါ.. အပါယ်မကြောက်သူ တစ်ဘ၀စံ တကိုယ်ကောင်းသမားများ..
ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ အမည်ခံထားတဲ့ နအဖကပြည့်သူ့သံဃာတွေကိုရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်.ပြီးတော့ဘာသာသာသနာကိုတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်အောင်လုပ်နေတယ်..ပြည်သူတွေမှာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၇ှိတယ် .ဒါတွေပာာနအဖကလုပ်ခဲ့ တာ.
ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ ၇ဲ့ အမေပာာ သူ့ ဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေကိုအကျဉ်းကျခံပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာခေါင်းမော့နိုင်အောင်လွတ်လပ်မှု ရဲ့ အကျိုးကိုခံစားစေချင်လို့ လုပ်နေခဲ့ တာ အားလုံးသိပါတယ်.ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပာာနိုင်ငံတကာမှာဘယ်ကိစ္စမှာမဆိုတိုက်
ပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ ပါ့မလား.အကျပ်အတည်းတွေ့ နေတဲ့ မြန်မာလူမျိူးတွေကိုသူသာမချစ်ခဲ့ ရင်ဒီမိုကရစီဆိုတာစာလုံးပေါင်းပြရင်တောင်မသိပါဘူး
ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာဆိုရင်ကြည့် တဲ့ မျက်လုံးကိုကအထင်သေးတာလား ဆိုတာခံစားဘူးတဲ့ လူတိုင်းသိပါတယ် ဒါကဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ စစ်အစိုးရကြောင့်ဘဲပေါ့ဗျာ။ဒါပာာမခံနိင်စရာပါ.
ငါတို့ နိင်ငံပာာဒီလောက်တောင်ဘဲ အောက်ကျနေသလားဆိုတာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်ပါ .
စစ်အစိုးရကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့ အရာတွေဘာရှိသလည်းဆိုတာပြစမ်းပါ။ ဘာလည်းပညာရေး
တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကအလကားလိုချင်လို့ ကိုလိုနီလုပ်ခဲ့ တာလို့ ငယ်ငယ်တုံးကသင်ခဲ့ ရတယ်ခင်ဗျ.
ခုတော့လည်းကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အဖိုးတန်တွေကို လက်ညိူးထိုးရောင်းစားနေတာနအဖကမြန်မာလူမျိူးနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုချစ်လို့ ထင်ပါရဲ့ ဗျာ
ကိုယ့်ဘာသာကိုပျောက်ကွယ်အောင်ကိုယ့်သံဃာကိုပြန်သတ်နေတာ သာသနာကိုထွန်းကားစေချင်လို့ တဲ့ လားဗျာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို လူမျိူးကိုအာဏာလုချင်လို့ အာဏာလို ချင်လို့ ဆိုရင် နအဖကရောဘာလို့ ပြည်သူ့ သဘောကို မကြည့် ဘဲ ဆက်ပြီး ဒီခုံပေါ်ကမဆင်းတာလည်းဗျာ.
ဒေါ်စုထက်တော်တယ် ထက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ကအားပေးတယ် မြန်မာပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှစ်၂၀
လောက်အချိန်ရှိတယ်.ခုလည်းနောက်မကျသေးပါဘူး .လုပ်လို့ ရပါတယ်.ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအမှန်တရားဆိုတာကို
နောက်ချန်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ လို လူတွေဘဲ သန်းရွှေကလိုချင်တာဗျ.
ရဲ့ သစ္စာနဲ့ စေတနာကိုယုံကြည်တယ်
ူအဲဒိယုံကြည်မှုကိုအသက်နဲ့ လဲ ပြီးကာကွယ်နေတယ်.စောင့်ရှောက်နေတယ် .
for keep defiant stand against the Tatmadaw.
If you were not blinded by the wetern propaganda,
ခင်ဗျာပြောတာက ဒေါ်စု တစ်ယောက်ထဲလို ထင်ပြီးပြောနေတာ။ အဲဒီလို ထင်တာကို က ကျနော်တို့ဗမာတွေ ရဲ့ အမှားပဲဗျ။ လစဉ် လတိုင်း NLD ထဲကို
၀င်ထွက် သွားလာနေတဲ့ နိုင်ငံခြား သံတမန်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သေမင်းတမန်တွေပဲဗျ။
တကယ်တော့ ဒေါ်စုဟာ သိုက်ဆရာတွေကို လှေပေါ် တင်ခေါ်လာခဲ့သူပဲဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံကို သိုက်တူးကြဘို့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲဗျ။
ဒါကြောင့် ဗမာပီပီ ရိုးရိုးလေး ကြည့်တဲ့အခါ ဒေါ်စု တစ်ယောက်ထဲလို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူမတစ်ယောက်ထဲသာ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးလို့ ပြီးနေတာ ကြာပြီ လေဗျာ။ ခုတော့ သူမဆရာကြီးတွေ ရဲ့ အထက်အမိန့် ကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ ဘ၀မှာ ရောက်နေရတယ်လေဗျာ။
ရထားတဲ့ ဆုတွေ၊ ပေးထားခံရတဲ့ ဆုတွေကို မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရင် သခင့်စကားကို အာခံမှု နဲ့ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာလို ပူးပေါင်း လုပ်ကြံခံရမှာလေဗျာ။
လက်ရှိ အချိန်မှာ တပ်မတော်ဟာ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ထက် အရေးကြီးတဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန်တွေကို နေ့ည မအား မနားတမ်း ဆောင်ရွက်နေရတယ်။
တွေ့ ကြုံလာရတဲ့ အနှောက် အယှက်တွေကို မျိုးချစ် တပ်မတော်ပီပီ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား နေရဆဲဖြစ်တယ်။
ကုန်ုကုန်ပြောမယ်ဗျာ၊ ဒေါ်စုကို ပြောနေရတာက မကူညီချင်နေပါ၊ မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်တော့တဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ပြောနေရတာဗျ။
ဒါကြောင့် ဒေါ်စုကို လမ်းခွဲနိုင်သော်လည်း တပ်မတော် ကိုတော့ ပြည်သူက ဘယ်သော အခါမှ လမ်းမခွဲ ဘူး ဆိုတာ ၂၀၀ဂ၊ ၂၀၁၀ က သက်သေပြနေပြီလေဗျာ။
မောင် ဆိုတဲ့ သူ
နောက်ဆုံးပိတ် မောင်ရင်ပြောထားတာလေးက စမယ်။ ဘာတဲ့ “ ဒှေါစုကို လမ်းခွဲနိုင်သှောလည် တပ်မတှောကို ပြည်သူကဘယ်တော့မှလမ်းမခွဲဘူး “ ဟုတ်စ
တပ်မတှောကို ပြည်သူက လမ်းခွဲသလား မခွဲသလား မောင်ရင် ပြောတဲ့ ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁ဝက သက်သေမဟုတ်သေးဘူး… တကယ့်လက်တွေ့ကျကျ independent proof က ၂ဝဝ၇ ပဲ။ ဘုန်းတှောကြီးတွေ လှုပ်ရှားမှုကို သာမန်လူတွေ အပါမခံခဲ့တဲ့ကြားကနေ နောက်ဆုံး ကျောင်းသားလူငယ်တွေ လက်ချင်းချိတ် ဝန်းရံပေးခဲ့တာ။ ချီတက်ရာ လမ်းကြောင်းဘေးက ပြည်သူတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်၂ ကျကာ ဒူးတုပ် ရှိခိုးငိုကြွေးကြတာ သက်သေပဲ။ ဒီထက်ရှင်းလင်းတဲ့ သက်သေ မောင်ရင့်ကိုပြစရာမရှိဘူး။ ဘာလဲ… ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လူပေါင်း 92% ထောက်ခံခဲ့တယ်လား။ နာဂစ်ကြောင့် ဘဝပျက်သွားတဲ့ လူပေါင်း ၂သန်းကျှော ဒုကဿခနဲ့မျက်ရည်တွေကို ထောက်ခဲမံတွေအဖြစ်မစာနာ မညှာတာ ပြောင်းပစ်နိုင်တာ။ ဝန်ထမ်းထု တစ်ရပ်လုံးဆီက ကြိုတင်မဲဆိုပီး ကြိုတင်ယူသွားခဲ့တဲ့ မဲတွေ။ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆနဿဒနယ်တွေက လံကြုပ် တွေအကုန် ပြည်သူတွေ ခါးသီးလွန်းနေပီ။ နာကျည်းနေကြပီ။
စီဘောက်ထဲမှာ တစ်ယောက်ပြောထားတဲ့ မက်ဆေ့ကို ကိုးကားပြောရရင်.. နှစ်ပေါင်းများစွာလဲ အချိန်တွေယူပီး ကိုယ်လိုချင်ရာ ဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေလဲ မုန်တိုင်းဒုကဿခသည် မထောက် အတင်းအကြပ် ဆနဿဒ ဒမြတိုက် ခိုးယူကာ ပြဌားန်းပီးနေပီ။ ပြည်သူချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်အပေါင်း ( ဒှေါစုအပါဝင် ၈၈ မျိုးဆက်များ၊ သံဃာာတှောများ) ကို ထောင်ထဲ အချုပ်အနှောင်ထဲ ထည့်ထားပြီးပြီ။ မောင်ရင်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်ကျိုးတွေရှာလို့လဲ ၁ဝသက်စားမကုန် ချမ်းသာပြီးနေပြီ။ ဒိထက် ဘာများပိုလိုချင်သေးလဲ မောင်ရယ်။ မောင်ရင် ခနခနရေးထားသလို ဘာကိုမှ မမြဲတဲ့ အနိစဿစတရားအရ သူတို့သေပြီးနောက် မှာတောင် သူတို့အမျိုးနွယ်၊ အဖွဲ့အစည်း အာဏာအမြဲတည်နိုင်မှာလား? မဟုတ်ပါပဲနှင့် ဘာကြောင့် တိုင်းပြည်ကို အမြဲတမ်း စစ်ကျွန်တိုင်းပြည်။ စစ်သားကို အမြဲတမ်း ပြည်သူပြည်သားအထက်ရှိနေစေမယ့် စံနစ်ကိုထူထောင်ချင်ရတာလဲ။ စစ်သည်လေးသိန်းဟာ အချုပ်အနှောင်ထဲက မုဆိုးမ မိန်းမကို မရှက်တမ်း မရွံ့တမ်း ဒီလောက် ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်နေတာ တပ်မတှောသားစစ်စစ်တွေတောင် ရှက်နေကြပါပြီ။
ဒှေါစုတစ်ယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး သူ့နောက်က အနောက်နိုင်ငံတွေကြောင့် ဟုတ်လေစွ..။ ထိုအနောက်နိုင်ငံများနှင့်ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံနေလျင် မောင်ရင်တို့ အကျိုးစီးပွား။ တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွား ဘာတွေယုတ်လျော့သွားလေမည်လဲ။ ကမဿဘာမှာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေး အဖက်ဖက်က တိ်ုးတက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ မောင်ရင်ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့သင့်မြတ်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေကြတဲ့ နိုင်ငံတွေချည်းပဲ။ ပြောင်းပြန်ပြောရလျှင် ထိုနိုင်ငံများနှင့် မပြေလည်နိုင်တဲ့ အီရန်လို/မြောက်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံတွေသာလျှင် လူသွေးလူမွေးမပြောင် ပဲ ကမဿဘာ့လူဆိုးနိုင်ငံများရယ်လို့ အများသတ်မှတ်ခြင်းခံနေတယ်။
ဘာတဲ့ ဒှေါစုက အထက်အမိန့် မဆက်နိုင်တဲ့ သူတဲ့ဟုတ်လား။ ဒိုင်ယာနာလို လုပ်ကြံခံရမယ်တဲ့လား။ ပေါရဲလိုက်တာ ကိုယ့်လူရယ်။ မောင်ရင်အမိန့်နာခံနေရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ပြန်ပြောနေသလားပဲ။ ဒှေါစုကို အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒိုင်ယာနာလိုလုပ်ကြံမလားတော့မသိဘူး ကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းတော့ အလောင်းဘုရား ဇာတိပြ ဝါးရင်းတုတ်နဲ့ ရိုတ်သတ်လုပ်ကြံတတ်တာ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း အော့နှလုံးနာတော့တာပဲ။ မောင်ရင်တို့ စစ်တပ်ကြီးက အခုလို ဖိနှိပ်ရက်စက်လေလေ ပြည်သူပြည်သားတွေ ကရုဏာ၊ မေတဿတာတွေက ဒှေါစုနဲ့ NLD အပှေါသက်ရောက်လေလေ။ စစ်တပ်ကြီးက သိကဿခာကျ အရှက်ရ၊ အရွံ့မုန်းခံရလေလေပဲ။ မောင်ရင်တို့ အခုလုပ်နေတဲ့ Daw Suu defamation campaign တွေက သူ့ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ပိုအရောင်ပြောင် လူထောက်ခံလာအောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ သူ့အတွက် မဲဆွယ်ပေးနေသလိုပဲ။ တဖက်က ကြည့်ရင် နအဖကျောထောက်နောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး လူထု ပိုအော့နှလုံးနာလာအောင် လုပ်ပေးနေသလိုပဲ။
နောက်ဆုံး အကြံပေးပါရစေ။ မောင်ရင်တို့လက်ထဲမှာ ကိုယ်လိုရာ လုပ်ထားပြီးတဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့ ဟာကြီးရှိနေပါပြီ။ စစ်သားတွေပီပီ ယောက်ျားသားတွေပီပီ။ သတဿတိရှိရှိနဲ့ ကိုယ်သွားမယ် ရည်စူးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကို သန့်ရှင်းစွားသွားပြီး အတိုက်အခံတွေကိုလဲ တရားမျှတစွာ ဖယ်ရှားဖြေရှင်းသွားကြည့်ပါ။ ဒီလောက်လေး လုပ်နိုင်ရင်ကို မောင်ရင်တို့ စစ်တပ်ကြီး အခြောက် မိန်းမလျာတွေရယ်လို့ ပြည်သူတွေက မြင်တဲ့ အမြင်တွေ လျော့သွားလိမ့်မယ်။
Nanda, ဆိုသူ ခင်ဗျာ
ခင်ဗျား ပြောတာတွေဟာ လူတစ်ဦးပေါ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုထက် မပိုတာကို တွေ့ ရတယ်။
ကျနော်ပြောခဲ့တာတွေက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ရဲ့ ရေတို ၊ ရေရှည် အမြင်နဲ့ ပြောခဲ့တာလေဗျာ။ ခင်ဗျား ပြော သလို၊ ထင်သလို ဒေါ်စုဟာ တိုင်းပြည် နဲ့လူမျိုးကို ချစ်လို့ တော့ မဟုတ်ဘူး။ လှေကြုံဝင်စီးရင်း မုန် တိုင်း မိနေတာဗျ ။ နောက်ပြီးတော့ သိုက်ဆရာ တွေကို လှေပေါ်တင်ခေါ်လာမိတဲ့ သူမရဲ့ သိုက်တူးဘို့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း တိုင်းပြည်အတွက် သေမင်းတမန်တွေ ဆိုတာ ခင်ဗျား နားလည်းရဲ့လား။ လစဉ်လတိုင်း NLD ထဲကို ၀င်ထွက် သွားလာနေတဲ့ သူ မရဲ့ စီမံကိန်းထဲက
(စစ်သည်လေးသိန်းဟာ အချုပ်အနှောင်ထဲက မုဆိုးမ မိန်းမကို မရှက်တမ်း မရွံ့တမ်း ဒီလောက် ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်နေတာ)
-လူမျိုးခြား ဘာသာခြားရဲ့ မုဆိုးမ၊
-အသက်ကြီးခါမှ အင်းလျားကန်ဘေးမှာ Williams နဲ့ငယ်မူပြန်တဲ့ မုဆိုးမ၊
-အိမ် အထက်ခန်းမှာ မီး အမှောင်ချပြီး David လှမြင့်နဲ့
-မိဘမျိုးရိုး အစဉ်အလာကိုမှ မထောက် အမျိုးသားရေး ကို သစ္စာ ဖောက်သွားတဲ့ မုဆိုးမ၊
-ဆွေမျိုးကို သူစိမ်းဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ မုဆိုးမ၊
-အစ်ကို အရင်း ခေါက်ခေါက်ကြီးက ပစ်ပယ်ထားရ လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းတဲ့ မုဆိုးမ၊
-မိခင် အရင်း ခေါက်ခေါက်ကို ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ထုံးတမ်းစဉ်လာနဲ့ မသာချတဲ့ မုဆိုးမ၊
-အပြောတစ်ခြား၊ အလုပ်တစ်ခြား၊ ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား လက်က ကားယားကားယား လုပ်တတ်တဲ့ မုဆိုးမ၊
-ပိတ်ဆို့ ရေး၊ ပျက်သုံးရေးကိုသာ လုပ်တတ်တဲ့ မုဆိုးမ၊
-ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အဆိုးမြင် ၀ါဒီ ဖြစ်နေတဲ့ မုဆိုးမ
-မြန်မာ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ချစ်ဟန်ဆောင် မုန်းနေတဲ့ မုဆိုးမ၊
-အပေါ်ပေါက်က ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး အောက်ပေါက်က လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေကို ဖွင့်ကျွေးထားတဲ့ မုဆိုးမ
-တိုင်းတစ်ပါး အားကိုး နဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်ကို ရန်သူ လို သဘောထား အဃာတ ကြီးမားနေတဲ့ မုဆိုးမ
-နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး လူမျိုးခြား ဘားခြားတွေနဲ့ အားရအောင် သဝေထိုးပြီးမှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ မုဆိုးမ
-နိုင်ငံရေး ပေးစာ ကမ်းစာတွေ နဲ့ ဘ၀မေ့ ဘ၀င်မြင့်
-လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ရှုတ်ချင်ရာ ရှုတ်ခဲ့ပြီးမှ " မိန်းကလေး လက်နက်ဆိုတာ မျက်ရေစက်ပါ...မောင်ရယ်" လို့မာယာများနေတဲ့ မုဆိုးမ
-မျိုးရိုး အစဉ်အလာကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်သူတိုင်း၊ စောင့်ထိမ်းသူတိုင်းက အော့နှလုံးနာတဲ့ မုဆိုးမ...စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ...
ကဲ... ဒါလောက်ဆို ရှင်းလောက်ရော့ပေါ့ဗျာ။
(အသက်ကြီးခါမှ အင်းလျားကန်ဘေးမှာ Williams နဲ့ငယ်မူပြန်တဲ့ မုဆိုးမ၊)
Maung ဆို တဲ့ င တုံး ရဲ့။
စစ် တပ် ကြီး ဝိုင်း ထား တဲ့ ၊ အ ကျယ် ချုပ် ခံ ထား ရ တဲ့ အ ဓျိုး သ ဓီး ရဲ့ ခြံ ဝင်း ထဲ ကို၊ ဗီ ဇာ ဝင် ခွင့် ရ မှ မြန် မာ ပြည် ကို လာ နိုင် တဲ့ လူ က ဘယ် လို ရောက် လာ သ လဲ။ ဖြေ ပါ အုံး င မောင် ဆို တဲ့ င တုံး ရဲ့။
စွတ် မ ဖြေ နဲ့၊ လူ လို စဉ်း စား ပြီး မှ ပြော ။ မင်း တို့ ရဲ့ စစ် တပ် ဝိုင်း ထား တဲ့ ဝင်း ထဲ william yetaw ဆို တဲ့ အ ကောင် ဘယ် လို ရောက် လာ သ လဲ။ ဖြေ လိုက် ပါ အုံး။ လမ်း ဘေး က ခွေး ဝဲ စား လောက် တောင် မ စဉ်း စား တတ် တဲ့ ကောင် တွေ ၊ ဒေါ် စု ကို သိက္ခာ ချ ချင် လို့ အ ကွက် ဆင် ပြီး yetaw ကိုလွှတ် လိုက် တာ လူ တိုင်း သိ တယ်။
yetaw သူ့ ဘာ သာ ဝင် လာ တယ် ဆို ရင် လဲ ၊ မင်း တို့ သန်း ရွှေ စစ် တပ် နဲ့ စစ် ဗိုလ် တွေ စောက် သုံး ကို မ ကျ ဘူး ဆို တာ ထင် ရှား နေ တာ ဘဲ။ ပြော တော့ တိုင်း ပြည် ကာ ကွယ် ဖို့ ၊ အ ခု တော့ ခြ ဝင်း တ ဝင်း တောင် မ ကာ ကွယ် နိုင် ဘူး ။ မင်း တို့ ကောင် တွေ ဘာ စောက် သုံး ကျ လို့ လဲ။
(မိခင် အရင်း ခေါက်ခေါက်ကို ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ထုံးတမ်းစဉ်လာနဲ့ မသာချတဲ့ မုဆိုးမ၊)
ဒေါ် ခင် ကြည် ရဲ့ ဖ ခင် ၊ ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ရဲ့ အ ဖိုး ဟာ ခ ရစ် ယန် ဆို တာ ကော သိ ရဲ့ လား။ မြန် မာ ပြည် မှာ လွတ် လပ် စွာ ဘာ သာ ကိုး ကွယ် ခွင် ရှိ တယ် ဆို တာ ကို ရော သိ ရဲ့ လား ။ ဒေါ် ခင် ကြည် ရဲ့ ဈာ ပ န မှာ လေး စား သော အား ဖြင့် ၊ ဘာ သာ စုံ က လာ ရောက် ဆောင် ရွက် ပေး တာ ဆီု တာ ကို ရော သိ ရဲ့ လား။ ဘုန်း ကြီး သံ ဃာ တော် တွေ ကို သတ် ထား တဲ့ ကောင် တွေ ဆို တော့ လည်း ဘယ် သိ ပါ့ မ လဲ။
လို ရာ လေး ကို ဘဲ ၊ ဆွဲ ပြီး ရေး မ နေ ပါ နဲ့ ။ မောင် ဆို တဲ့ ကောင် ရေ ၊ အ သက် ဘယ် လောက် ရှိ ပြီ လဲ ၊ မ သိ ရင် လည်း မင်း ထက် အ သက် ကြီး တဲ့ လူ တွေ ဆီ မှာ မေး ကြည့် ပါ အုံး ။
ခင်ဗျာပြောတဲ့ တစ်ချို့ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံအားဖြင့် ခြွင်းချက် နဲ့တော့ လက်ခံနိုင်စရာ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုယုံကြည်တဲ့ Liberal democratic standard အရဆိုရင်တော့ ကျနော်ပြောနေတာတွေ အားလုံးဟာ သူမကို အတော်လေးကို သက်ညှာနေဆဲ
ဆိုတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
သူမ ကျင်လည် ကျက်စားခဲ့ရာ အသိုင်းအ၀န်းမှာတော့
လင်ဘယ်နှစ်ယောက်ယူတယ်၊ ဘယ်မှာ နန့့် ကျောဆွဲ တယ်၊ ဘာတွေလုပ်တယ်၊ ကလေး ဘယ်လောက် မွေးတယ်၊ အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ဘယ်မှာ ၀ယ်တယ်၊ အရက် ဘီယာ ဘယ်မှာ သောက်တယ် စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြ၊ ဝေဖန်ကြတယ်ဗျ၊ ခေါင်းဆောင် လုပ်ချင် သူတွေကိုဆိုရင် အထူးကို လိုက်ကြပ်တယ်ဗျာ။ ဒါဟာ ဒေါ်စုလို လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီကို ကိုးကွယ်သူတွေ ပေးဆပ်ရမယ့် အကြွေးဇာတ်တွေပေါ့ဗျာ။
ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ကျနော် ခုလို ပြောပြတာကိုတော့ Freedom of Speech လို့ပြောကြလေရဲ့ ဗျာ။ ဒါကြောင့်
ဒီလို ပြောသူကို တစ်ယူသန် ဆိုရင်တော့ တစ်လောက လုံးက လူတွေဟာ တစ်ယူသန်တွေ ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောတာတွေက ဒေါ်စုဘ၀မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဆိုတော့ တိုင်းသိ၊ ပြည်သိ၊ ကမ္ဘာသိ ဖြစ်နေ လို့အထောက်အားကို မလို တော့ဘူးဗျာ။
ဒေါ်စုရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ သောင်းပြောင်းထွေလာ
တွေကို ပြောလိုက်တာနဲ့ တပ်မတော်ကို တွဲပြီးမြင်နေ တာကိုက ဒေါ်စုဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှား နေပြီလေဗျာ။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားထားတဲ့ ဖေါက်ပြန်ခြင်း သုံးမျိုးနဲ့ မိုက်ဇာတ်ခင်းနေတယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ သညာ ၀ိပလ္လာသ-အမှတ်သညာ မမှန်တော့ခြင်း
(သူစိမ်းကို ဆွေမျိုး ထင်မှတ်ခြင်း)
၂။ စိတ္တ၀ိပလ္လာသ-အသိစိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်ခြင်း
(လူဆိုတာ အတူတူပါပဲဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီး လူမျိုးခြားကို လင်လုပ်ခြင်း)
၃။ ဒိဋ္ဌိ ၀ိပလ္လာသ-အယူအဆတွေ ဖေါက်ပြန်နေခြင်း
(မျိုးချစ်တပ်မတော်ကို အပုပ်ချ၊ အနိုင်ရမှ သူမ အာဏာရမယ်လို့မှားယွင်းစွာ ယူဆနေခြင်း)
(ဒေါ် ခင် ကြည် ရဲ့ ဖ ခင် ၊ ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ရဲ့ အ ဖိုး ဟာ ခ ရစ် ယန် ဆို တာ ကော သိ ရဲ့ လား။)
အဲဒါ ပြောတာပေါ့ဗျ၊ တစ်သက်လုံး ဖုန်းသမျှ ကုန်းကာမှ ပေါ်..ဆိုတာ။
မြည်းတွေအတွက် ဟန်ဆောင် ရှင်ပြုအလှူတွေ လုပ်ပြ၊ ဟန်ဆောင် တရားနာပြ၊ ဟန်ဆောင် အလှူ့ အစ်မကြီး လုပ်ပြ၊ ဗိုလ်ချုပ် စိတ်ကြိုက် ဘုရားရှိခိုးပြ၊
သမီးက ထပ်မိုက်၊ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားကိုယူ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံကို ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်ဘို့အကြံထုတ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အရ သရဏဂုံ အမှန်တကယ် တည်နေ သူဟာ ဘယ်ဘာသာကိုမှ ခေါ်ပြီးဆုတောင်းစရာ မလို ဘူးဆိုတာကော သိရဲ့လား။ နောက်ဆုးံ ဘာသာ ကူးပြောင်းမှု ( Last minute conversion) ကို လက်ခံအောင် လုပ်တာကို အဟုတ်ထင်ပြီး ဘာသာရေး
လွတ်မှု လို့ကင်ပွန်းတပ်လိုက်တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဘာသာရေး အဆင့်အတန်းကတော့ တကယ်ပဲဗျာ။
တပ်မတော်ကို တစ်ချိန်လုံး ခွပ်နေတဲ့ ဒေါင်းဆိုတော့လဲ
နောက် ဆုံးတော့ က နေရင်း ဟိုဟာ ပေါ်လာပါပဲ ဗျာ။
(မင်း တို့ ရဲ့ စစ် တပ် ဝိုင်း ထား တဲ့ ဝင်း ထဲ william yetaw ဆို တဲ့ အ ကောင် ဘယ် လို ရောက် လာ သ လဲ။ ဖြေ လိုက် ပါ အုံး။ )
ခင်ဗျားတို့ ရဲ့အနောက် ဘိုးတော်ကြီးက အနောက် မယ်တ်ာကြီး ထံကို အကြားအမြင်နဲ့ ၀င်ရောက်လာ တယ်လို့တရားဝင်ဖြေထားပြီလေဗျာ။
သူကိုယ်တိုင်တောင် ၀င်ရာ၊ ထွက်ရာလမ်းတွေကို တရားဝင်လိုက်ပြခဲ့တာပဲလေ။ သဲထိပ် ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းလေး၊ တတိယ အရွယ်ရဲ့ တတိယ ဝေဒနာ လို့ဆိုရမှာပေါ့။
မရှင်းရင် ခင်ဗျားရဲ့ အနောက်ဘိုးတော်ကြီးကို ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုရင်း မေးကြည့်ပါလားဗျာ။
ခုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ဘိုးတော်ကြီး ပိုပြီး လွတ်လပ် နေတာပဲ၊ သွားမေးလိုက်ပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်ပြောထားတာတွေက ပုဂဿဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှု အခြေခံတယ်ပြောတဲ့ မောင်ရင့် အမြင်တွေကတော့ ဘယ်လောက်များ Strategic view တွေများပါသလဲ။ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ မောင်ရင်ပြောတာတွေ ဟာ Daw Su personal prejudices ပှေါအခြေခံတာတွေချည်းပဲ။
နအဖ သံရုံး/ထောက်လှမ်းရေး နဲ့ လုံခြုံရေးတွေ စတဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီး မဖိတ်ခှေါပဲခိုးဝင်လာတဲ့ William Yattaw ကိစဿစကိုတောင် သူ့ဟာသူ အိမ်ထဲမှာအချုပ်ကြနေတဲ့ မုဆိုးမက ပလူးဖို့ခှေါလို့ပဲ ဝင်လာသလိုလို ရေးသားနိုင်လေတဲ့ ကိုယ့်လူရဲ့ ပုတ်သိုးညစ်ထေးလှတဲ့စိတ်ကို အော့ကျောလန်လေစွ။
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးရှာပြီးရေးသားနိုင်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ မောင်ရင်ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတာ ကိစဿစမရှိဘူး၊ မောင်ရင်ကိ်ုယ်စားပြုပြောနေတဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတှောဆိုတာကြီးပါ ငထွားကြားက ခါးနာနေလောက်ပြီ။
မောင်ရင်တို့ ဒှေါစုကို ထိုထိုသော အချက်များ၊ အမုန်းတရားများနှင့်တိုက်ခိုက်ဖိနှိပ်နေတာ တိုင်းပြည်ရေတိုရေရှည် အကျိုးအတွက်ရယ်လို့ဆိုလျှင်၊ အခြားသော (မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး စသည်) အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစု ခေါင်းဆောင်များ ကိုရော မည်သို့အကြောင်းပြချက်များနှင့် ဆက်လက်ဖိနှိပ်ချုပ်နှောင်ထားရသလဲ။ လစ်ဘရယ်ဖြစ်စေ၊ မောင်ရင်တို့ပြောတဲ့ စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်စေ.. ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို သွားနေပါတယ်လို့ပြောနေလျက်က ဘာကြောင့်များ ဒီမိုကရေစီအခြေခံများ ယခုကတည်းက စတင်မကျင့်သုံးနိုင်ပါသလဲ။ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ပင်လျင် ပြည့်ဝစွာမကျင့်သုံးနိုင်သေးတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ယုတ်စွအဆုံး မောင်ရင် ချီးမွမ်းနေတဲ့ ၂၀၁ဝက ဖင်နားကပ်နေပြီ။ ပြိုင်ပွဲကြီးက စတော့မယ် အပြေးသမားများ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ထရိန်နင်ပေးခွင့်၊ လေ့ကျင့်ခွင့်မပေးပဲ အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ခိုင်းလို့ရပါသလား။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူစီမံခဲ့ပါလျက် ယခုအချိန်ထိ တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ယူဖို့ အစွမ်းမိမိမှာ မရှိသေးလို့ ယုံကြည်မှုနည်းနေသေးလို့ အခြားအပြေးသမားတွေ ခြေထောက် ကြိုးချည်ပြီးမှ ငါတို့ပြိုင်တော့မယ် တွေးနေသလား။ စသည် စသည်.. များစွာသော အကြောင်းရာများ ပြောမယ်ဆို မပြီးဆုံးနိုင်ပေဘူး။ မောင်ရင့်မှာလဲ ဒှေါစု prejudices အဆင့်က နဲနဲတက်ပြီး Macro ကျကျ၊ မောင်ရင်ပြောတဲ့ ရေတိုရေရှည် Strategic ကျကျ သုံးသပ်ပြနိုင်မယ်ဆို သုံးသပ်ပြပါလေ..။ မောင်ရင်ပြောတဲ့ ဒှေါစု Scandal တွေ တကမဿဘာလုံးကသိပြီးဖြစ်လို့ ထောက်ပြစရာမလိုလောက်အောင် ပြည့်စုံနေပါပီဆိုလျင် ထိုကန တစ်ဆင့်တက်ပြီး မောင်ရင်ဘာများ ဗျူဟာကျကျ တင်ပြပြောဆိုနိုင်သေးလဲ ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ တကမဿဘာလုံး အပါဝင် မြန်မာပြည်သူများကတော့ မောင်ရင် စွပ်စွဲတဲ့ ထို Scandal များ အမှန်ပဲဖြစ်ပါစေအုံး၊ ထို အရာများထက် များစွာ အောက်တန်းကျ ညစ်စုတ်ပဲ့လှတဲ့ နအဖထက် တော့ သာသေးတယ်ရယ်လို့ ဆက်လက် အားပေးထောက်ခံမြဲ ထောက်ခံနေကြအုံးမှာမို့လို့ပဲ ကိုယ့်လူရေ။
(အဲဒါ ပြောတာပေါ့ဗျ၊ တစ်သက်လုံး ဖုန်းသမျှ ကုန်းကာမှ ပေါ်..ဆိုတာ။ )
လူ တ ကာ သိ နေ တဲ့ အ ကြောင်း အ ရာ တ ခု ၊ စာ အုပ် တွေ ထဲ မှာ ကြာ မြင့် စွာ က ရေး ထား တဲ့ အ ကြောင်း အ ရာ တ ခု ကို ၊ အ ခု မှ သိ တယ် ဆို ရင် တော့၊ မင်း မှာ ဗ ဟု သု တ က ဘယ် လောက် မ ရှိ ဘူး ဆို တာ ပြ နေ တာ ဘဲ။ ဟောင် ချင် ရင် လည်း စာ လေး ဘာ လေး အ ရင် ဖတ် ပါ အုံး။ အဲဒါ ပြောတာပေါ့ဗျ၊
တစ်သက်လုံး ဖုန်းသမျှ ကုန်းကာမှ ပေါ်..ဆိုတာ။
( နောက်ဆုးံ ဘာသာ ကူးပြောင်းမှု ( Last minute conversion) ကို လက်ခံအောင် လုပ်တာကို အဟုတ်ထင်ပြီး ဘာသာရေး
လွတ်မှု လို့ကင်ပွန်းတပ်လိုက်တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဘာသာရေး အဆင့်အတန်းကတော့ တကယ်ပဲဗျာ။)
လပ် စွာ ကိုး ကွယ် ခွင့် ဆို တာ နား မ လည် ရင် ၊ မင်းတို့ ရေး ထား တဲ့ အ ခြေ ခံ ဥ ပ ဒေ ကို အ ရင် ဖတ် ကြည့် လိုက် အုံး င တုံး ရေ။
(မြည်းတွေအတွက် ဟန်ဆောင် ရှင်ပြုအလှူတွေ လုပ်ပြ၊ ဟန်ဆောင် တရားနာပြ၊ ဟန်ဆောင် အလှူ့ အစ်မကြီး လုပ်ပြ၊ ဗိုလ်ချုပ် စိတ်ကြိုက် ဘုရားရှိခိုးပြ၊)
တုံး ပ င တုံး ရယ် ၊ အ ဖိုး က ခ ရစ် ယန် ဖြစ် တာ နဲ့ ၊ မြေး က ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ မ ဖြစ် ရ တော့ ဘူး လား ။ ထပ် ပြီး ပြော လိုက် မယ် ။
(သမီးက ထပ်မိုက်၊ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားကိုယူ၊)
ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ဟာ နီ ပေါ နိင် ငံ က ဆို တာ ကို ရော သိ ရဲ့ လား။ ဒါ ဆို ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကိုး ကွယ် တဲ့ သူ တွေ ကို ရော လူ မျိုး ခြား ၊ ဘာ သာ ခြား ကိုး ကွယ် တဲ့ လူ တွေ လို့ စွတ် စွဲ အုံး မှာ လား ။ မင်း တို့ က သန်း ရွှေ ကိုး ကွယ် ပြီး သံ ဃာ သတ် နေ တဲ့ အ ကောင် တွေ ဆို တော့ ၊စွတ် ဆွဲ လည်း အ ဆန်း မ ဟုတ် ပါ ဘူး ။
(သူကိုယ်တိုင်တောင် ၀င်ရာ၊ ထွက်ရာလမ်းတွေကို တရားဝင်လိုက်ပြခဲ့တာပဲလေ။ သဲထိပ် ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းလေး၊ )
တစ်သက်လုံး ဖုန်းသမျှ ကုန်းကာမှ ပေါ်.. အဲ ဒါ ဘဲ လေ၊ ဝိုင်း ထား တဲ့ စစ် တပ် ကြီး က yetaw ဘယ် လမိး က ဝင် ထွက် မှန်း မ သိ လို့ yetaw ကိုယ် တိုင် လိုက် ပြ ရ ရှာ တယ် ။ဘယ် တာ က ထွက် ၊ ဘု ရင် ရူး တာ က ထွက် ဆို တာ အဲ ဒါ ပေါ့
တော် လိုက် တဲ့ စစ် တပ် yetaw ကို တောင် မ တား နိင် တာ ၊ ဒါ နဲ့ များ တိုင် ပြည် ကာ ကွယ် မယ် တဲ့ ၊ အ ရပ် က တီု့ ၊ တို့ ရေ ၊ ကြား လို့ မှ ကောင်း ကြ သေး ရဲ့ လား
ဒီမိုသမားတွေ...ဟားဟား... Blog တွေ၊ web site တွေမှာ နအဖဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြော
ပေးပြီး စိတ်တွေကိုဆွပေးနေတာပြောစရာရအောင် အဲဒါကို ကိုယ်ဟာကိုဟုတ်လှပြီထင်နေတာ... မင်းတို့တွေဒါတွေနဲ့လောက်ပဲအချိန်ကုန်အောင်လုပ်ထား
တာ ခုထိနားမလည်ဘူး။ ခုနိုင်ငံအုပ်ခုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေကဘာမှတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။
မောင်ဆိုသူ ငတုံးသို့ ..
မင်းတို့ စစ်ခွေးအစိုးရလက်ထက် မြန်မာပြည် ဘယ်နေရာမှာ တိုးတတ်လာသလဲ.. ငတုံးသိသလောက်ဖြေပါ..
လည်း ဆိုတာထက်' ဒီလောက်အင်အား ကြီးတဲ့အမေရိကန်စက်တင်ဘာ ၁၁ ဖြစ်သင့်ရဲလား အရင်စဉ်းစားကြည့်ဦး။ဒါဥပမာတခုပဲရှိသေးတယ်။
(သမီးက ထပ်မိုက်၊ ဘာသာခြားကိုယူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံကို ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်ဘို့အကြံထုတ်။)
တိုင်း ရင်း သား လူ မျိုး စု တွေ ဖြစ် တဲ့ ကချင် ၊ကရင် ၊ ချင်း အ များ စု ဟာ ခရစ် ယာန် ဘာ သာ ဝင် တွေ ၊ ဒီ တိုင်း ရင်း သား တွေ ကို ဘာ သာ ခြား ကိုး ကွယ် တဲ့ လူ ၊ လူ မိုက် တွေ လို့ စွတ် စွဲ နေ တာ လား။ ဒီ တိုင်း ရင်း သား တွေ ကို စော် ကား နေ တာ လား ။
5 January 2010 at 11:24
(ဒီမိုသမားတွေ...ဟားဟား... Blog တွေ၊ web site တွေမှာ နအဖဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြော
တာ ခုထိနားမလည်ဘူး။ ခုနိုင်ငံအုပ်ခုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေကဘာမှတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။)
လည်း ဆိုတာထက်' ဒီလောက်အင်အား ကြီးတဲ့အမေရိကန်စက်တင်ဘာ ၁၁ ဖြစ်သင့်ရဲလား အရင်စဉ်းစားကြည့်ဦး။ဒါဥပမာတခုပဲရှိသေးတယ်။)
်စက်တင်ဘာ ၁၁ ဖြစ် တာ အ မေ ရိ ကန် စစ် တပ် ထောက် လှမ်း ရေး အ သုံး မ ကျ လို့ ဘဲ ၊ yetaw ဝင် ထွက် နိုင် တါ လည်း မင်း တို့ စစ်တပ် အ သုံး မ ကျ လို့ ဘဲ ၊ ရှင်း ရှင်း လေး
ပထမဆုံးသိဖို့လိုတယ်။ ပြီးမှ တိတိကျကျပြော ဘယ်အ
ဖွဲ့စည်းနဲ့ဆိုင်လည်ဆိုတာ။ ရှိရှိသမျ၊ဖြစ်ဖြစ်သမျ တပ်နဲ့
ပြောမနေနဲ့၊ရှင်းရှင်း ပြောရရင်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်ဖြစ် မင်း
သေရင် မီးရှို့ ပစ်ရမယ့် ခန္ဒာကြီး ခံစား စံစားဖို့ အတွက် အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြ... သတ်ကြဖျက်ကြ.. ဖမ်းကြ..ဆီးကြ.. မိန်းမတယောက်ကို ယောက်ကျားရင့်မာ ကြီးများက ၀ိုင်းဝန်း အပုတ်ချကြကျ.. သေရင် ပြည်သူ သန်း၅၀ ဒုက္ခ ရောက်တာ အညီ ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့ .. အမောင်လူယုတ်မာတို့.. ခင်ဗျားတို့ အကုသိုလ်နဲ့ ရှာတာ စားကြတော့ ခင်ဗျားတို့ တစ်မိသားစုလုံး.. ခံရတော့ တစ်ယောက်ထဲ ခံရမှာ သိကြပါ..
ပထမဆုံးသိဖို့လိုတယ်။ ပြီးမှ တိတိကျကျပြော )
ဟုတ်တယ် Simpleman ရေ၊ တစ်ခါလာလည်း မျိုးချစ်တပ်မတော်ကို အပြစ်ပြော၊ စွပ်စွဲ၊ ဘာအထောက် အထားမှလည်း မပါ။
ဒါကြောင့် ဒီမိုတို့ ရဲ့ အနောက် ဘိုးတော်ကြီး အနောက် မယ်တော်ကြီးထံကို လယ်လို အရောက်လာခဲ့ တယ်ဆို တာ ကျနော် လက်လှမ်းမှီသလောက် ပြောပြလိုက်တာ။
တီကောင်ကို ဆားနဲ့ တို့ လိုက် သလို ဖြစ်သွားတော့ တာပါပဲဗျာ။ထွန့်ထွန့် ကို လူးနေတာပဲ။
(တိုင်း ရင်း သား လူ မျိုး စု တွေ ဖြစ် တဲ့ ကချင် ၊ကရင် ၊ ချင်း အ များ စု ဟာ ခရစ် ယာန် ဘာ သာ ဝင် တွေ ၊ ဒီ တိုင်း ရင်း သား တွေ ကို ဘာ သာ ခြား ကိုး ကွယ် တဲ့ လူ ၊ လူ မိုက် တွေ လို့ စွတ် စွဲ နေ တာ လား။ ဒီ တိုင်း ရင်း သား တွေ ကို စော် ကား နေ တာ လား ။)
ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေက အရိုးခံတွေဗျ၊ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ရောက်လာပြီးမှ အတင်းအဓမ္မ စည်းရုံး ခံလိုက်ရလို့ခုလို ဘာသာခြား အဖြစ်ကို ရောက် နေရ တာ၊ တိုင်းရင်းသား သဘာဝ အားဖြင့် ဆိုရင် ရိုးရာနတ် ကိုးကွယ်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆိုတာ သမိုင်းက သက်သေပဲဗျ။
အဲဒီတော့ ကျနော် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ လူမျိုးခြား တွေ မဟုတ်ကြဘူး၊ တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်း သောက်နေကြတဲ့ ဆွေမျိုးတွေဗျ။ ဒေါ်စု လုပ်ရပ်တွေနဲ့တော့ မိုးနဲ့ မြေကို ကွားခြားလှပါတယ်ဗျာ။
ဒေါ်စုက တိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ အေးအတူ ပူအမျှ နေခဲ့ ဘူးတာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဒေါ်စုဘ၀က အနောက၊် ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ က အရှေ့ ဖြစ်နေတာ လေဗျာ။
အဲဒီတော့ သူမ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါမှာတောင် သူမ ချစ်လှပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲက အမျိုးသား တစ်ယောက်ကိုမှ မစဉ်းစားခဲ့ဘူးလေ။ မတူ ဘူး၊ မတန်ဘူးပေါ့ဗျာ။
သူများနိုင်ငံမှာ လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အစိုးရက ကျိုးပေါက်တာလဲ ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဆိုလိုတယ်ထင်တယ်။
9/11 အကြမ်းဖက်သမားတွေက နဂိုကတည်းက ပြည်တွင်းမှာစိမ့်ဝင်နေပြီး ပြည်တွင်းလေကြောင်းလေယဉ်တွေကို အကြမ်းဖက် အပိုင်စီးလာတာဟ ကောင်လေးတွေရ။ အဲဒီကုလားတွေ ဘယ်ကောင်မှ ဗီဇာမလိုဘူး။ မင်းတို့ ဘန်ကောက်သံရုံးက ယက်တောကို ညီညီအောင် ကို ဗီဇာထုတ်ပေးသလို ထုတ်ပေးမှလာလို့ရတာမဟုတ်ဘူး သဘောပေါက်လား။ မင်းတို့ စစ်အစိုးရခေတ်မှာ ကြံ့ဖွတ်၊ စရဖ၊ စစစ၊ SB စသည် အဖွဲ့ပေါင်းစုံက ဘယ်အဖွဲ့ကို အစီရင်ခံရတာတုံး လုပ်ပါအုံး။ နောက်ဆုံး တက်ရတာ ကက/ကြည်းမဟုတ်လို့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတုံး။ မင်းတို့ ရိလို့ ဒီမိုတွေ တွန့်တွန့်လူးနေတယ် ဟုတ်စ/ ပေါပါပေ့... အခြားသူတော့မသိဘူး ငါကတော့ မင်းတို့တွေ အာနေတာ တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ပဲ။ မင်းတို့အပြောတွေ စက်ဆုပ်လွန်းလို့ ငါ့ဖာသာ အားလို့ဝင်ပြောနေတာ။ မင်းတို့လဲ မင်းတို့ပြောသမျှလူအားလုံး နိုင်ငံရေးလုပ်စားနေကြသူ နိုင်ငံရေးသမားများမှတ်မနေနဲ့ စောက်တုံးတွေရဲ့..မင်းတို့ လည်နင်းလိုက်မယ် ငါတို့ပေးထားတဲ့အခွန်ငွေတွေ အတောင့်လိုက်ထွက်လာမယ် ဘာမှတ်လဲ
စောက်ချီးစား မောင်. မင်းပြောလေကဲလေ
ငါတို့ဖာသာ ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်တာ။ မင်းအဂဿငလိပ် အတင်းလုပ်လို့ ငါတို့ ခရစ်ယန်ကိုးကွယ်ရာမှတ်တယ်ထင်နေတာလား။ မင်း လေသံက တကယ့် မဟာဗမာဝါဒ စီးနေတဲ့ကောင်ပဲ။ မင်းတို့ ဗုဒဿဒဘာသာ ဗမာတွေမှ မင်းတို့ တိုင်းပြည်ထဲလူရာသွင်းမှာလား။ စကားကိုကြည့်ပြော။ မင်းတို့ဖာသာ မင်းတို့ ဗမာချင်းချင်း ဒှေါစုကို တိုက်ခိုက်ရုံတင်မကဘူး.. ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားတွေကိုတောင် မင်းတို့ ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ မင်းလေသံကပြနေပီ.
မင်းတို့ကို ဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှ အယုံကြည်မရှိတာလဲ မပြောနဲ့ မင်းအခုပြောနေတဲ့လေသံကိုမင်းပြန်ကြည့်
.. မင်းတို့ ဒီစောက်ချိုးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကလဲ ၇ နှစ်ပြည်ထောင် မူဝါဒကို လက်လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့..
(ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ဟာ နီ ပေါ နိင် ငံ က ဆို တာ ကို ရော သိ ရဲ့ လား။ ဒါ ဆို ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကိုး ကွယ် တဲ့ သူ တွေ ကို ရော လူ မျိုး ခြား ၊ ဘာ သာ ခြား ကိုး ကွယ် တဲ့ လူ တွေ လို့ စွတ် စွဲ အုံး မှာ လား ။)
ွှအသောက မင်းတရားကြီး ရဲ့ ကျောက်စာ အထောက် အထားတွေ နဲ့ ပိဋကတ် ကျမ်းစာ အထောက်အထား များအရ ဗုဒ္ဓဟာ လောကသား အားလုံးအတွက် ပွင့့် ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့သိထားလေဗျာ။
ဗုဒ္ဓက စောင့်လေ မျိုးနွယ် ဆိုတာကို ဟောထားခဲ့တယ် နော၊ ခင်ဗျာတို့အနောက် မယ်တော်ကြီး ဒီအဆုးံ အမ ကိုတောင် မလိုက်နာနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်လေဗျာ။
ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား အများစုက အမျိုးလည်းတူ၊ ဘာသာလည်းတူ၊ သဘောလည်းတူ၊ မနောလည်းဖြူ ဆိုတာ ခင်ဗျာ သိတယ် မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာက ဘာသာခြား မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ရဲ့ အရိပ်မဲကြီးအောက်မှာ မှောင်ခိုပြီး လိုက်ပါလာတဲ့ paracite မဟုတ်ဘူးဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အေးအေးချမ်းချမ်း လေးနဲ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ လေဗျာ။ ခင်ဗျား အဲ့ဒီ သမိုင်းကို လေ့လာပါဦး။
နောက်မှ ထပ်ဆွေးနွေးပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားကို အချိန်ပေး
ခင်ဗျား အဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကျနော်ဆိုတဲ့ မောင့်ကို ကြိုက်သလို ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး(အောင်ဆန်း) အမည်ကို အလွဲ သုံးစား လုပ်ပြီး မစော်ကားပါနဲ့လို့ အသိပေးလိုပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ စကားတွေထဲမှာ ဒေါသ အကုသိုလ်တွေ ချည်းပဲဗျ။ ဒါကြောင့်ပါ။
မပြီးနိုင် မစီးနိုင်သေးပါလား မောင် ဆိုသူ။
မောင်ရင့်ကို ကျုပ်မေးထားတာလေးတွေလဲ ဖြေဆိုပါအုံးလေ။ တိုင်းပြည်ရေတို ရေရှည် အကျိုးအတွက် ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ မောင်ရင့် ဗျူဟာမြောက်အမြင်တွေကိုလဲ ကြားပါရစေအုံးလေ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ဘယ်အချိန်ထွက်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဘယ်အချိန်ဖွဲ့ရမလဲ တွက်ချက်ပြပါအုံးလေ။ ဒီနေ့ အဖွဲ့ကောက်ဖွဲ့ မနက်ဖန် စည်းရုံးရေးဆင်း၊ သဘက်ခါ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခိုင်းပြီး သိပ်တရားမျှတတဲ့ ၁၄နှစ်ကြာ အစီအမံရွေးကောက်ပွဲကြီးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော။
Time will heal your wounds. You should not be rubbing your wounds with salt of irrational complaints.
Just wait and let them heal, ok?
မရှက်ပါနဲ့ ကွာ.. မင်းပထွေးကြီး လုပ်သမျှ သံယောင်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ကောင်တွေ..
မင်းတို့ ပထွေးလေး တခြားဗိုလ်ချုပ်တွေတောင် ဘာမှန်းမသိဘူး..ဒီနေ့ သန်းရွှေသေတာနဲ့နောက်တစ်ယောက် အဖေပြောင်းခေါ်ပြီး.. သန်းရွှေအပုတ်ပြန်ချမယ့်ကောင်တွေ.. ခင်ညွှန့် တုံးကလဲ ဒီလိုပဲလေ..
(ဒေါ်စုကို နိုင်ငံခြားသား ယူခဲ့မိလို. ခုထိဆဲလို.မပြီးသေးပါလား သူ.ယောက်ျားကြီး သေတာတောင် ၁၀ နှစ်ကျော်လာပြီ။ ဒေါ်စုက တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစါးနေ တာလား)
လူသေပေမယ့် တိုင်းပြည်အပေါ်ကျရောက်လာမယ့် ဘေးရန်ကတော့ မသေသေးဘူးဗျ။ ဒါကြောင့်လည်း
မြနမ်ာပြည်ကို ယနေ့ အထိ ဆက်လက်နှောက်ယှက် နေတာပေါ့ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့၊ တိုင်းပြည်ကို ဒေါ်စုက ရောင်းစားတာပါ ခင်ဗျား၊ သူမရတဲ့ "ဆု" တွေဟာ တိုင်းပြည်ကို ရောင်း စားလို့ ရတာလေဗျာ။
မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုပေးဘို့ငြင်းဆို ကန့် ကွက်ခဲ့တာ အနောက်အုပ်စု ဒေါ်စုရဲ့ ဆရာကြီးတွေ လေဗျာ။
တကယ်တော့ ဒေါ်စုဟာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းလို တိုင်းကျိုး ပြည်ပြု ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ဘဲ တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံပြီး ရောင်းစား လိုက်တာလေဗျ။ ဒေါ်လာတွေလဲ တောက်တောက်လဲ ဆိုပါတောဗျာ။
ကျနော် လေ့လာထားမိတာလေးကို မျှဝေ ပါရစေ ခင်ဗျာ။
မဏိံမိဂေါ ပဿန္တောပိ၊ တိဏံ ခါဒံဝ ဂစ္ဆတိ။
မိဂေါ-သမင်ဆိုတဲ့ တိရစ္တာန်သည်၊ မဏိံ-ပတ္တမြား ရတနာကို၊ ပဿန္တောပိ-မြင်နေ တွေ့ နေရပါလျက် နဲ့၊
တိဏံ ၀-အသုံးမကျ၊ တန်ဘိုးမမြင့်မားတဲ့ မြက်ကို သာလျှင်၊ ခါဒန္တော-စားမြဲ စားလျက်ပင်၊ ဂစ္ဆတိ-သွားနေပါ၏။ တဲ့ ဗျ။
အနှစ်သာရ အပြည့် အ၀၊ ယဉ်းကျေးတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ မြန်မာပီသစွာ ရေးသားထားတဲ့ ပတ္တမြားရတနာ နဲ့ တူတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ကွန်မင့်တွေကို တွေ့ နေ မြင်နေရ ပါ လျက် နဲ့ တန်ဘိုးမရှိတဲ့ မြက်နဲ့ တူတဲ့ အယုတ်တမာ၊ အ မနာပ၊ အရိုင်း အစိုင်းတွေကိုသာ စားသောက် ၀ါးမျို နေကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံး ဘယ်ဘ၀ကို ရောက်နေပြီ လဲဗျာ။ စဉ်းစားချိန် မတန်သေးဘူးလား။ မောင်ကတော့ ခွင့်လွှတ်နေမှာပါ။
( Ottara said...
မောင် ဆို သော သူရဲ့ရေးသားမှုများကြောင့်
ခရိယန် အများစုနေသော ပြည်နယ်များ နအဖ ကို ယုံကြည်မှု နဲ လာမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။)
ဘာမှ မပူနဲ့ ။ ကျနော် အခုရေးနေတာက တိုင်းရင်း သားပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံက ညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေ နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာ ပူးပေါင်းပြီးမှ ရေးတာဗျ။
သူတို့ တွေ အားလုံးက ဘာသာရေး သမိုင်း၊ နိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ အမြင်တွေကို ခွဲ ခွဲ ခြားခြား နားလည် သဘောပေါက်နေကြပြီး မျိုးချစ်ဓာတ် အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ သူတွေဗျ။ ခင်ဗျားတို့ ထင် သလို အမြင်ကျဉ်းမြောင်းပြီး ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုး ရေးတွေ ကြောင့် မြန်မာပြည်ကို မုန်းတီးနေကြသူတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်နဲ့ လက်တွဲ ပြီး တစ်အူတုံ ဆင်း ညီမစ်ကို မောင်နှမ အရင်းတွေလို တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အတွက် တတ်နိုင်ရာက ပါဝင် နေတာပေါ့ဗျာ။
ကဲ Ottara, ဒါလောက်ဆို ရှင်းနေပြီပေါ့ဗျာ။
ွှအသောက မင်းတရားကြီး ရဲ့ ကျောက်စာ အထောက် အထားတွေ နဲ့ ပိဋကတ် ကျမ်းစာ အထောက်အထား များအရ ဗုဒ္ဓဟာ လောကသား အားလုံးအတွက် ပွင့့် ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်၊ နီပေါ နိုင်ငံမှာ မီးရှူးသန့် စင် ဖွားမြင်တော်မူတယ်လို့သိထားတယ်လေဗျာ။
ဗုဒ္ဓက စောင့်လေ မျိုးနွယ် ဆိုတာကို ဟောထားခဲ့တယ် နော၊ ခင်ဗျာတို့အနောက် မယ်တော်ကြီးက ဒီအဆုးံ အမကိုတောင် မလိုက်နာနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်လေဗျာ။
ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား အများစုက အမျိုးလည်းတူ၊ ဘာသာလည်းတူ၊ သဘောလည်းတူ၊ မနောလည်းဖြူ ဆိုတာ ခင်ဗျား သိတယ် မဟုတ်လား။
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ရဲ့ အရိပ်မဲကြီးအောက်မှာ မှောင်ခိုပြီး လိုက်ပါလာတဲ့ paracite မဟုတ်ဘူးဗျ။
မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အေးအေးချမ်းချမ်း လေးနဲ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ လေဗျာ။ ခင်ဗျား အဲ့ဒီ သမိုင်းကို လေ့လာပါဦး။
( shwe myanmar said...
ထောက်ခံတယ် မောင်ရေ.. ငါတို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ အဲလို ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြောမှ ကြိုက်တာ.. ဒေါ်စုခြံထဲက free sex လူ့တော်သလင်းပွဲတွေ အကြောင်းရေးပါဦး။)
ဟုတ်ကဲ့ တိုင်းရင်းသား အစ်ကိုတော် ရှမ်း ခင်ဗျာ။
ကျနော်လဲ တိုင်းရင်းသားမို့ပွင့်လင်း မြင်သာဖြစ်တာကို သဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာ။
အချိန်တန်လာပြီဆိုတာနဲ့ သိစရာတွေ၊ သိသင့်တာ တွေကို ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား ညီ အစ်ကို မောင်နှမ များ သိအောင် ဝေဖန် ပြောပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။
ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို နည်းမျိုးစုံ နဲ့ နိုင်ငံခြားအားကိုးပြီး လှည်းစားတာကို ကျနော် ဘယ်သောအခါမှ လက်မခံပါ ခင်ဗျာ။
ကို ရွှေမြန်မာ နှလုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်းပါစေ
shwe myanmar said...
မောင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို သိပ်လေးစားတယ်။ မောင်လိုလူမျိုး ဆယ်ယောက်ရှိရင် ဒီမိုတွေကို လှည့်ကြည့်စရာ မလိုဘူး။
စုကြည် အစုပ်ပလုပ် ဗိုလ်စုတ်မအတွက် အချိန်တွေနှမျောစရာ ကောင်းလို့ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နေရာမပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားရဲဘော် တွေ ရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ သံဒိဌါန်ဘဲ။
ဘူး။ ဒီအဖွားကြီးကိုယ်သီလကိုယ်သိ ကိုယ်နေသင့်တဲ့နေ
ရာကိုယ်သိသင့်တယ်။ ခုမသိတော့ ဒီအဖွားကြီးရှေ့ရေးက
တော့ ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုလူမိူးတွေမြန်မာမြေ
In Afghanistan, hundreds have taken to the streets of Kabul and elsewhere to protest U.S. killing of civilians. The incident that has sparked the most outrage took place in eastern Kunar on December 27th when ten Afghans, eight of them schoolchildren, were killed. According to The Times of London, US-led troops dragged innocent children from their beds and shot them duringanighttime raid. Afghan government investigators said the eight students were aged from 11 to 17, all but one of the from the same family.
Afghan President Hamid Karzai had harsh words for US and NATO forces on Tuesday in the wake ofastring of attacks that has killed dozens of civilians. His comments came in an interview on Al Jazeera.
On Monday, hundreds of people, mostly students, protested in Kabul and in the province of Nangarhar against the US killing of civilians. Nearly 30 civilians have died over the past two weeks alone in US-led airstrikes and ground operations.
But the incident that has sparked the most outrage took place in eastern Kunar on December 27th when ten Afghans, eight of them schoolchildren, were killed.
According to the Times of London, US-led troops dragged innocent children from their beds and shot them duringanighttime raid. Afghan government investigators said the eight students were aged from 11 to 17, all but one of the from the same family. The headmaster of the local school said seven of the children were handcuffed and then executed. A preliminary investigation by the United Nations reinforced Afghan claims that most of the dead were schoolboys.
For more we go to Afghanistan to speak with Jerome Sparkey, he is the Times of London correspondent in Afghanistan who reported on this story. He joins us on the telephone from Kabul.
Jerome Starkey, the Times of London correspondent in Afghanistan. Website: JeromeStarkey.com
you would have regretted for
your mud slinging against Myanmar
instead of committing destructive acts
that cause mayhem and terrors to Myanmar.
for threatening with utter devastations against the Tatmadaw
If you were not blinded by the western propaganda,
for everlasting unity, prosperity, and sovereignty of Myanmar.
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ရဲ့ အရိပ်မဲကြီးအောက်မှာ မှောင်ခိုပြီး လိုက်ပါလာတဲ့ paracite မဟုတ်ဘူးဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အေးအေးချမ်းချမ်း လေးနဲ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ လေဗျာ။ ခင်ဗျား အဲ့ဒီ သမိုင်းကို လေ့လာပါဦး။)
ရီ ရ ပါ လား ၊ မင်း ဘဲ သမိုင်းကို လေ့လာပါဦး။
ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ မ ရောက် ခင် က ဗ မာ တွေ အ ရည် ကြီး ဝါ ဒ ကိုး ကွယ် နေ တာ ကော သိ ရဲ့ လား ။ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ဆို တာ ရေ ခြား ၊ မြေ ခြား က လာ တာ။ အ ရည် ကြီး ဝါ ဒ က ဗမာ တွေ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ အ ရင် ကိုး ကွယ် နေ တာ။ အဲ ဒါ ဗ မာ တွေ ရဲ့ မူ ရင်း ဘာ သာ ဆို ပြီး မင်း တို့ ဆက် ပြီး ကိုး ကွယ် နေ ပါ လား။ ထူး တော့ လည်း မ ထူး ပါ ဘူး အ ခု လည်း မင်း တို့ ကောင် တွေ သံ ဃာ သတ် ၊ သူ တ ပါး သား သ မီး မု ဒိန်း ကျင့် နဲ့ ၊ အ ရည်း ကြီး ဝါ ဒ ကိုး ကွယ် နေ တာ နဲ့ အ တူ တူ ဘဲ
အ နော် ရ ထာ က ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ထွန်း ကား ဖို့ မင်း တို့ လို အ ရည်း ကြီး ကိုးကွယ် တဲကောင် တွေ ကို အဓမ္မ နိုင် နှင်းခဲ့ ရ တယ် ဆို တာ ကော သိ ရဲ့ လား ။ အေး အေး ချမ်း နဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကို ပြောင်း ခဲ့ ရ တာ မ ဟုတ် ဘူး၊ ပု ဂံ သ မိုင်း ဖတ် ကြည့် ပါ အုံး ။
(အ သော က မင်းတရားကြီး ရဲ့ ကျောက်စာ အထောက် အထားတွေ )
အ နောက် မျော်ှ ဆို ပြီး ၊ ဟို လူ ဆွတ် ဆွဲ ၊ ဒီ လူ ဆွတ် ဆွဲ ၊ အ ခု ကျ တော့ လည်း သူ ကိုယ် တိုင် က မြန် မာ နိုင် ငံ အ နောက် ဖက် က အိန္ဒိ ယ နိင် ငံ ရဲ့ အိန္ဒိ ယ လူ မျိုး ဘု ရင် အ သော က မင်းကိုကိုး ကား ပြော နေ ပါ လား။ အ တော် ဘဲ ရီ ရ ပါ လား။
အ သော က မင်း ဆို တာ က ဘီ စီ၂၆၉ က နေ ဘီ စီ ၂၃၂ ထိ အန္ဒိယ နိုင် ငံ ကို အုပ်ချုပ် တဲ့ Ashoka the Great။
မင်း က အိန္ဒိ ယ နိုင် ငံ က အ သော က မင်း ကို လေး စား ပြီး ၊ သူ့ကျောက် တိုင် ကို ကိုး ကား ပြော တော့၊ ငါ က လည်း မင်း လေး စား တဲ့ အ သော က မင်း ကို ဘဲ ကိုးကား ပြော လိုက် ပါ မယ်။ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ လေး စား ကိုး ကွယ် တဲ့ အ သော က မင်း Ashoka the Great လို့ ထင် ရှား လူ သိ များ ရ တဲ့ အ ချက် ၁၆ ချက် ရှိ တယ် အဲ ဒါ တွေ က တော့
1. He respected to all human beings
2. He believed in peace and love
3. He didn't hated who were not Buddhists , he even helped non- buddhist
4. He respected women and allowed them to educate
5. He belived in tolerance
6. He helped to animals and trees by suppling them needs and medical help
7. He also helped to his enemies or neighbours
8. He treated his subject as his child, he never terrorized his subject like other emerors and kings in human history
9. He spread the message of nonviolence/ ahimsa
10. He believed truth and hated untruth
11. He believed in physical as well as spiritual progress of humanbeing
12. He helped to weak people , old people and poor people and he also respected mighty people
13. He gave importance to education
14. He hated wars, bloodshades and cruelity
15. He banned human slavery , animal hunting and death sentance from his terretories and asked the same to his neighbours
16. He treated Prisoners, criminals as human being and tried his best to socialize them rather to harm them
အဲ ဒီ အ ချက် တွေ ထဲ က နံပတ် ၃ အချက် လေး ကြည့် ပါ ။ ကိုယ် ကို ပြန် မေး ကြည့် ပါ ၊ ငါ ဟာ ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ အကြောင်း ငါ ကိုး ကား ပြော နေ တဲ့ အ သော က မင်း လို တ ကယ် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ သက် ဝင် ယုံ ကြည် ရဲ့ လား လို့။
တ ခြား အ ချက် တွေ လည်း ဖတ် ကြည့် ပါ အုံး၊ မင်း ကိးု ကား ပြော နေ တဲ့ အ သော က မင်း နဲ့ နိုင် ငံ အာ ဏာ ကို လက် ဝါး ကြီး အုပ် ထား တဲ့ နအဖ ကြေး စား တပ် နဲ့ ဘယ် လို ကွာ တယ် ဆို တာ။
ဗ ဟု သု တ ခေါင်း ပါး ပြီး ၊ ကိုယ် ပိုင် ညဏ် နဲ့ မ ဟုတ် ဘဲ ၊ ပ ထွေး ရေး ခိုင်း တာ တွေ ကို ရေး နေ ရ တဲ့ မင်း တို့ လို ကောင် တွေ ကို ပြော နေ လဲ အ ပို ဘဲ။ ရေး စ ရာ မ ရှိ့ ၊ မ ပြော တတ် တော့ အ မေ ရိ ကန် အ ကြောင်း လှည့် ပြော ၊ လှည့် post လုပ် ၊ ငါ တို့ က တော့ မြန် မာ တွေ ၊ မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ မင်း တို့ မ ဟုတ် တာ ပြော ၊ မ ဟုတ် တာ ရေး ၊ မ ဟုတ် တာ လုပ် နေ တာ တွေ ကို ထောက် ပြ နေ တာ ၊ အ မေ ရိ ကန် အ ကြောင်း ပြော ချင် ရင် တော့ ၊ အ မေ ရိ ကန် တွေ နဲ့ သွား ပြော လိုက် ပါ။ အ မေ ရိ ကန် က မင်း ကို အ ဖက် မ လုပ် ရင် တော့၊ ကို ထိုက် blog ကို အ မြီး ကုတ် ပြန် လာ ဆက် ဟောင် နေ ပေါ့။
ငါ က တော့ မင်း တို့ လို ကောင် တွေ နဲ့ ဆက် ပြော မ နေ တော့ ဘူး ။ ခရစ် ယာန် ဘာ သာ ဝင် တိုင်း ရင်း သား တွေ ကို စော် ကား ရေး သား ထား တဲ့ ဟာ တွေ လဲ ၊ မှတ် တမ်း ဒီ မှာ ရှိ သွား ပြီ၊
(3. He didn't hated who were not Buddhists , he even helped non- buddhist)
You have done your homework but partially. However, I will give you some credit for your hard work.
Today'd Tatmadaw leadership follows the foot steps of ancient kings and noble traditions of Myanmar.Therefore, all recognized religions within Myanmar are officially supported every year by the government of Myanmar. They may be Buddhists in majority, bu they do not discriminate any religion or any religious follower.
Just like King Asoka, the Tatmadaw leadership does not hate who are not Buddhists; the Tatmadaw learship even helps non-Buddists.
(ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ဆို တာ ရေ ခြား ၊ မြေ ခြား က လာ တာ။ အ ရည် ကြီး ဝါ ဒ က ဗမာ တွေ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ အ ရင် ကိုး ကွယ် နေ တာ။ )
Regretably, you fail to understand History of Myanmar inaproper context. Aris bogus monks were not Theravada Buddhist monks, but they were of Tantric form of beliefs that came from Mahayana Buddhism. In fact, these Aris bogus were crooks that cheated on the people of Bagan. Way before the appearance of Aris bogus monks, we, the Myamars, had already been formingakind of beliefs in animism. Again, these animistic beliefs were neverapart of colonialism.
What we officially embrace is Theravada Buddhism whose language is Pali, not Sanskrit.
Therefore, I would like to urge you to do more on your homework so that you would getafull credit for it. Otherwise, you fail again, get it?
တကယ်တော့ သူတို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ Freedom of Speech ဆိုတာတွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆန့် ကျင် နေတာလေဗျာ။
သူတို့ ကြိုက်သလို ပြောရမှ free ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် သူတို့့ ကို အကွက်ကျကျ ပြန်ပြောလာသူဆိုရင်တော့ အယုတ် တမာ ပြောကြ၊ ဆဲကြပေါ့ ဗျာ။ သူတို့ ကိုယ် သူတို့ဘာမှန်းကို မသိကြတော့တာဗျ။ အဲဒါလဲ သူတို့အဆင့် အတန်းပဲပေါ့ဗျာ။
အလကာင်္ ရသ စာပေ စည်းကမ်းမှာ အပေတတ္ထ ဒေါသ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ရှေ့ နောက် စကား မညီ၊ သွေးရုး သွေးတမ်း၊ ပရမ်းပတာ အရုးတစ်ယောက်လို ဘာမှန်း မသိ ပြောနေသူတွေကို စိတ်မဆိုးပဲ အရုးစာရင်းမှာ ထည့်ရမယ်လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ့။
အဲဒီတော့ သူတို့ လို အလားတူ လူတွေကို အ ပေတတ္ထ ဒေါသလို့ခေါ်တဲ့ အရူးစာရင်း သွင်းပြီး ပြည်ပအားကိုး ဆိုတဲ့ စိတ္တဇ ဆေးရုံမှာ တင်ထားလိုက်ရုံပေါ့ဗျာ။
7 January 2010 at 04:49
မောင် .. all right
ပြောတော့ freedom ဒီမိုကရေစီတဲ့... သူတို့ကိုပြန်ပြီတုန့်ပြန်ပြောဆိုတော့... ဟိုဆဲဒီဆဲ.ဘာမှကိုအသိညဏ်ရှိရှိခံနိုင်ရည်မရှိဘူး။ ဒီလိုလူမိုးတွေနိုင်ငံအကိူးအတွက်လေးဘာလေးဆို
ိုတော့ဘယ်သူကယုံမှာလဲ။ ဒါပင်မဲ့ ဟဲဟဲ ကိုလိုနီလုပ်ခြင်တဲ့လူတွေကတော့ယုံခြင်
သူတို့ လို ဒီမို အမည်ခံ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိ သူတွေဟာ အဲဒီ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုတွေ ကြောင့်ပဲ
BBC, VOA, RFA ကလာတဲ့ မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒ မုန်တိုင်းတွေမိပြီး မြန်မာပြည်ကနေ အမှိုက် သရိုက်တွေလို လွင့်စင် သွားကြတာပေါ့ဗျာ။
ကျောန်တို့ နိုင်ငံအတွက်တော့ ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ နဲ့ ဝေးသွားတာပေါ့၊ မြန်မာပြည် သိပ်ကို ကံ ကောင်းပါ တယ်ဗျာ။
မင်းတို့ ပဲ အသိဥာဏ်ရှိရှိအများအကျိုးအတွက် သံဃာသတ်.. ကျောင်းသားသတ်.. ပြည်သူသတ်.. ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဗုံးလျှောက်ခွဲ.. နာဂစ်မှာ ဆောက်ကျင့်ယုတ်တာလဲ နိုင်ငံတကာအသိ.. အနှစ်၂၀ကျော်ပြီ မီးတောင် မှန်အောင်လာအောင်မလုပ်နိုင်.. တော်တော်ဥာဏ်ရှိတဲ့ န.အ.ဖ နဲ့ငတုံးနောက်လိုက်တွေ.. မင်းတို့ ဝါဒဖြန့်တာတွေ မြန်မာပြည်က တဘတ်သက် သတင်းစာမှာပဲ သွားလုပ်ပါကွာ.. အရိုးလေးကိုက်ပြီး ဒီမှာလာဟောင်မနေနဲ့ .. လက်ပဲညောင်းမယ်.. ဘယ်သူမှမယုံဘူး..
အင်း... အင်း... အယုတ်တမာကြီး ကောင်းစားဖို့အယုတ်တမာလေးတွေ ယုတ်ပေးကြ ယုတ်ပေးကြ.. အယုတ်တမာကြီးနဲ့ ထပ်တူ ကုသိုလ်ရတယ်..
(မိန်းမတယောက်ကို ယောက်ကျားရင့်မာ ကြီးများက ၀ိုင်းဝန်း အပုတ်ချကြကျ)
မိန်းမ ဖျက်လို့ပြည်ပျက် ခဲ့တာကို ခင်ဗျားတို့ လည်း သိပြီးသားပါဗျာ။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်စုလို မိန်းမ တွေ ပေါ့ဗျာ။ ကနော်တို့ခင်ဗျားတို့ မိခင်တွေလို ဆိုရင်တော့ ဘာပြောစရာ လိုမလဲ၊ ခုတော့ဗျာ ...ဒေါ်စု မိုက်လိုက်ပုံကတော့ ကန်းကုန်ပါလေရော...
မြန်မာနိင်ငံရဲ့ သမိုင်းဦး အချိန်က စပြီး ယနေ့ မျိုးချစ် တပ်မတော် လက်ထက် အချိန်အထိ၊ မြန်မာ အစိုါ်ရ အစဉ်အဆက် ဘယ်သံဃာကို မှ လက်ဗျား နဲ့ တောင် မထိခဲ့ဘူးဗျ၊ သတ်ဘို့ ဆိုတာ ဝေလာဝေး။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို တစ်ခက်လှည့်နဲ့ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ဘာသာဖျက်၊ သာသနာဖျက် လုပ်ရပ်ပဲဗျ။
အဲဒီ အဖျက်လုပ်ရပ်တွေကိုသိလို့အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုး လေးစား တန်ဘိုးထာတဲ့ မျိုးချစ်တပ်မတော်က အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်နေရ တာပေါ့ဗျာ။
Juvenile offenders complain of sexual offences by staff
US juvenile offenders in detention facilities are often subjected to abuse by other inmates and staff.
A new report has shown that inmates around the country have been subject to high rates of sex abuse and victimization, with nearly 1 out of every3victims reporting incidents.
A Justice Department study has found that nationwide, about 12 percent of youths held in state-run, privately-run, or local facilities reported some type of sexual abuse.
Six individual sites, where inmates were interviewed, reported victimisation rates of 30 percent or higher.
About 10 percent reported incidents involved facility staff people, with nearly all of the complaints were against female staffers.
Only2percent of the reported incidents involved abuse perpetrated against young inmates by other youths.
The facilities where most of the abuse was reported are: Pendleton Juvenile Correctional Facility in Indiana; Corsicana Residential Treatment Centre in Texas; Backbone Mountain Youth Centre in Swanton, Maryland; Samarkand Youth Development Centre in Eagle Springs, North Carolina; Cresson Secure Treatment Unit in Pennsylvania; and the Culpeper Juvenile Correctional Centre in Mitchells, Virginia.
At all facilities, most reports of sexual victimization involved non-consensual sex acts with another youth or serious sex acts with facility staff.
Staff sexual misconduct was higher in state-run facilities than in privately or locally operated sites, where victims said they had been abused in areas such asaclassroom or office, the shower, or in their own sleeping areas.
8 January 2010 at 01:36
8 January 2010 at 06:30
Asaresult of protecting the Holy Samgha as such, the patriotic keep gaining great merits day and night.
You are so so funny man, but I can understand you, you must write about this because you get salary, that is your job. Right or wrong you will never know until you die. Why your thought is too narrow like this, But that is not your fault also, you grown up uneducated family. What kind of book do you read? Do you choose by yourself or other people give you to read? Do you have sense to control yourself? How many languages do you understand? Do you really like History? Have you ever read and compare about Burmese History and Western History or other Asian country History? Are you really human? Before you die (everybody are going to die one day) have you even made good things in your life? Just for yourself not for country? With really human warm-heart.
Maung does not seem to understand this type of words. He can only understand "Bark" and "Take bone for him"
He is getting salary for this job.
How successful is his job?
Who believe what they said?
Getting salary for nothing.
ကိုထိုက် blog ကို မရောက်တာကြာလို. လာလိုက်တော့ တွေ.လိုက်ရတဲ့ comment တွေက တစ်ရာကျော်ပါလား
မောင်မောင် နဲ. simple man ဆိုတဲ. ဒေ၀ဒတ် နောက်လိုက်တွေကလဲ နေ.တိုင်းကို အချိန်ပေးပြီး
comment တွေနဲ. တိုက်ခိုက်နေလိုက်တာ သူတို.အစား ဖတ်ရတဲ့လူတောင် မောတယ်
လောကကြီးမှာ မတရားမှုကို တရားမှုလို. ထင်နေတဲ့ သူတို.ကို သနားမိပါတယ်
အတုမရှိ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တောင်မှ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသေးတာပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်ခိုက်ခံရတာ ဘုရားဟောသလို လောကသဘာဝပါပဲ
တော်သေးတယ် အခုဘ၀မှာ တရားမှုကို တရားမှုလို.မြင်
မတရားမှုကို မတရားမှုလို. အမှန်သိမြင်တဲ့ ဦးနောက် ရှိနေတာ ကိုယ့်ဘာသာ ၀မ်းသာမိတယ်
နောင်ဘ၀တွေမှာ (မောင်မောင် နဲ. simple man) ကဲ.သို. မတရားမှုကို တရားမှုလို. ထင်တဲ့
ဒေ၀ဒတ် အတွေးအခေါ်တွေနဲ. ဦးနောက်အမှောင် မကျပါစေနဲ.လို. ကုသိုလ်ပြုတိုင်း ဆုတောင်းမိတယ်
အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း တရားကို လူတိုင်းကြုံရမှာပါ
အဲဒီ အချိန်ရောက်တဲ့ အခါ ကိုယ်ငယ်ငယ်က ပြောမှား ပြုမှား အတွေးမှားခဲ့တာတွေကို နောင်တရတတ်တယ်
ဆရာတော် ပြောသလို "အောက်ကျမှပဲ မင်းတို.ဘာသာ ကြည်.ရှင်းကြကွာ" လို.ပဲ တိုင်းပြည်အတွက် နေ.မအား ညမအား အလုပ်ရှုတ်နေသော
မျိုးချစ် တပ်မတော် ဆိုသူ ဒေ၀ဒတ် အုပ်စုအား ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်
ဒီမိုသမားတွေမင်းတို့ကောင်တွေလောက်တော့ စောင့်ချည်ပဲ. ဘာလိုလဲဆိုတော့ မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ပြောမယ်။ ကိုယ်ပြောတာတွေကို ဆန့်ကျင့်တဲ့လူတွေကိုဆဲမယ်။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငတွေကိုကြည်ပြီးစိတ်ကူးယှဉ်မယ်။ ကိုလူမိူးအချင်းချင်း ရန်သူလိုဆက်ဆံမယ်။ လက်တွေကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက် တွေကတော့ ဘာမှကိုနိုင်ငံမှာမရှိဘူး။ ဒီမိုကရေစီလုပ်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ရင်
တွေကလည်းကြည့်လိုက်ဦး။ ကျွှန်စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူများနိုင်ငံခိုင်းတာလုက်လုပ်ပြီး အလဲကားအကူညီရခြင်နေတာကလွဲလို ကျနိတာဘာမှအမြင်ကိုမရှိဘူး
ဘယ်မင်းလက်ထက်မှာများ မေတ္တာပို့ တဲ့ သံဃာတွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ် ခေါင်းရိုက်ခွဲ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို သူပုန်စခန်းတွေလို ၀င်ဆီးသလို အရက်သောက်ပြီး ၀င် ပစ်သတ် ၀င်ဖမ်းလုပ်ဖူးပါသလဲ.. အလှုငွေတွေတောင် ခိုးတဲ့ တပ်မတော်သားများလေးစားပါဧ။်
(မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ပြောမယ်။ ကိုယ်ပြောတာတွေကို ဆန့်ကျင့်တဲ့လူတွေကိုဆဲမယ်။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငတွေကိုကြည်ပြီးစိတ်ကူးယှဉ်မယ်။ ကိုလူမိူးအချင်းချင်း ရန်သူလိုဆက်ဆံမယ်။ လက်တွေကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက် တွေကတော့ ဘာမှကိုနိုင်ငံမှာမရှိဘူး။)
ခင်ဗျာ ပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်းကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် ကျည်ဆံတွေလိုပဲဗျာ။ ပစ်မလွဲ ထိမြဲထိ၊ မှန်မြဲ မှန်နေ တော့တာပါပဲဗျာ။
ဒီမိုတွေခဗျာတော့ ဖျတ်ဖျတ်ကို လူးနေမှာပဲ။
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဆက်ပြီးသာ ချီတက်ကြပါစို့ ခင်ဗျာ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို အရက်သောက်ပြီး သူပုန်စခန်းလို ၀င်စီး သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီး၊ တွေ့ သမျှ အကုန်ခိုးတွေကောင်တွေကို အကောင်းမြင်ဝါဒီဆိုသူ ငတုံးများ အကောင်းမြင်ဝါဒမှ ရှင်းပေးကြပါ... နားမလည်လို့ ပါ။
burma vj ကို more4 channel က ပြလို. နောက်တစ်ကြိမ်ထပ် ကြည်.လိုက်ရတယ်။ မအေလိုး ခွေးမသား စစ်တပ်၊ လက်ထဲမှာ သေနတ်ကိုင်ပြီး မိုက်ရိုင်းလိုက်တာများ၊ မင်းတို.သတ္တိ ရှိရင် သေနတ်ခြင်းယှဉ်ပစ်ကြပါလား၊ သေနတ်မရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး ကလေး ကျောင်းသား မိန်းမ သက်ကြီးရွယ်အို မကျန် အနိုင်ကျင့်နေတာများ စောက်ရှက်မရှိကြဘူး၊ အဲဒါကြောင့်လဲ ဒင်းတို.ရုတ်တွေ မွဲခြောက်ခြောက်နဲ. စောက်ကျက်သရေကို မရှိဘူး။ နင်တို.တတွေရဲ. သားသမီးတွေလဲ သေချင်းဆိုးနဲ.သေကြပါစေ။ နင်တို.တတွေရဲ. မိန်းမတွေ မအေတွေ ဖအေတွေလဲ သေချင်းဆိုးနဲ. သေကြပါစေ။ နင်တို.တတွေလဲ ရှေ.တန်းမှာ သေချင်းဆိုးနဲ. ၀ဋ်ပြန်လည်ကြပါစေ။ နင်တို.တတွေရဲ. တဆွေလုံး တမျိုးလုံး ဘ၀ အဆက်ဆက် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကြုံတွေ.ပြီး ငရဲမှာ မလွတ်တန်းခံကြပြီး အောက်တန်းကြတဲ့ ဘ၀တွေရပြီး သေချင်းဆိုးတွေနဲ. ကာလနာတိုက်ကြပါစေလို. ပြည်သူတရပ်လုံးကိုယ်စား ကြိမ်စာတိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
shwe myanmar (aka) Maung,
ထောက်ခံတယ် မောင်ရေ.. ငါတို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ အဲလို ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြောမှ ကြိုက်တာ.. )
”ရှမ်းအတု ငလိမ် မောင်”...
မင်းကို ”ရှမ်းဘာသာစကါးနဲ့ ငါမေးထါးတာ” ခုထိမဖြေနိုင်သေးပဲ ပါတ်ပြေးနေတဲ့ ကောင် .. မင်းလို ငလိမ် ပြောတဲ့စကား ဘယ်သူ ဖင်ကြားညှပ်မှာမို. အချိန် ကုန်ခံ ရေးနေလဲ ။ (နအဖ လို) ID နံမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးလဲ ခွေးချီးလို အနံ.ထွက်နေတာ မင်းဘဲဆိုတာ လူတိုင်းသိ။
shwe myanmar ID နဲ့. ရှမ်းလူမျိုးပါပြောပြီး ငါ ရှမ်းလိုမေးတာ မင်းမဖြေနိုင်တဲ့ လူလိမ် ဟားဟား
ဗိုလ်ချုတ်တွေ မဟုတ်တာလုပ်နေတာကို ဝေဖန်သူမှန်သမျှ ဥပဒေမဲ့ နှိပ်ကွတ်တော့ တာပါဘဲ။ စစ်တပ်ထဲ က ဗိုလ်ချုတ်ဇော်ထွန်းက ဘိုသန်းရွှေ နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ သားသမီးတွေ မဟုတ်တာလုပ် တိုင်းပြည် စီးပွားရေးမတက်ဘဲ တက်တယ်ပြော။ သတင်းစာ နေ့ စဉ်ဖတ်တာ ဘိုချုတ် မှုးကြီးဘဲရှိတယ်လို့ မှန်တာပြောတဲ့သူတွေ မြန်မာပြည် အုပ်ချုတ်ရေးစနစ် က လက်မခံပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ကလာဘ်စားတယ်။ အာဏာပြတယ်။ ပြည်သူ အကျိုးမကြည့်ဘူး အကြံဥာဏ်မယူဘူး။ စီမံကိန်း မအောင်မြင်ရင်လဲ တာဝန်မယူဘူး။ ငြိမ်နေတယ်။
သိပ်ကြောက်တတ်လွန်းလို့”နအဖ န၀တ လုပ်သမျှ အရေးမယူရ” လို့၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံ ထဲမှာရေးထားတာဘဲ ကြည့်တော့ ဗျို. ....စစ်ဘိုချုတ်ကြီးတွေ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ရဲတာ ကတော့ အထင်အရှားဘဲ။ သူတို.တွေဟာ ”မတရားတဲ့ အမိန့် ယူသမျှ ဖီဆန်ကြတို့ ။ ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ ကင်းဝေးရေးတို.” ဆိုတာတွေ ပြည်သူတွေ ခေါင်းထဲရောက်မှာ နီးစပ်သွားမှာ စိုးရိမ်နေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တပည့်တွေ မတရားတာ မဟုတ်တာလုပ်နေတာကို မသိဟန် ဆောင်နေတယ်။ အမှန်ထောက်ပြတဲ့သူ ကို နှိပ်ကွတ်အရေးယူတယ်။ (တရုတ် ဗီယက်နမ် တို့ နဲ့မတူတာ အဲဒါဘဲ).. ဒါကြောင့်လဲ ဒီနိုင်ငံတွေလို မြန်မာပြည် မတိုးတက်တာ ဘာမှမဆန်းဘူး ။ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းလဲ ဒီဖွဲ.စည်းပုံအရတော့ ဘာမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲဘို.မရှိဘူး..
မျိုးချစ်စိတ် ရှိလှပါတယ် ဆိုတဲ့ (သေချင်းဆိုး) တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ..ရဲ့ ..ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတဲ့ (proven) ကမ္ဘာသိ လုပ်ရပ် များ...
မေးကြည့်ဦး။ အဆိုးမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ နိုင်ငံမှာဘယ်လိုနေရာမှ အသုံးတည့်မှ မဟုတ်ဘူး။ ခုပြောနေတဲ့လူတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်လေးနည်းနည်းပေး
လိုကရင်ပစပ်တန်းပိတ်မဲ့ ခံယူချက်၊ အတွေးခေါ်တွေလောက်
်နဲ့ဝေဖန်နေရင်တော့ နောင်ဘ၀များမှပဲ မင်းတို့လိုချင်တဲ့ဒီမို ရလိမ့်မယိ။
မအေလိုး ခွေးမသား စစ်တပ်၊ မင်းတို.ကို ဆန်.ကျင်တဲ့ လူမှန်သမျှကို အဆိုးမြင်တယ်လို.ပြောရအောင် မင်းတို.က ဘာတွေများ ကောင်းတာတွေ လုပ်နေလို.လဲ
အောက်တန်းအကျဆုံး စိတ်ဓါတ်တွေ လုပ်ရပ်တွေနဲ. သေနတ်ကိုင်ပြီး စောက်ရှက်မရှိ ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မသာတွေကများ
မင်းတို.သတ်လို.သေတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ အနှိပ်စက်ခံရ အိမ်မီးရှို.ခံရ တိုင်းပြည်လဲ ဆင်းရဲတွင်းကမတက်
မင်းတို.သာ စောက်ရှက်မရှိ တိုင်းပြည်ပိုက်ဆံ ခိုးစားပြီး တရားမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့ ပြည်သူမှန်သမျှကို ပစ်သတ် ထောင်ချ စောက်ရှက်မရှိ ၀န်မခံချင်ဘူး
တို.ပြည်သူတွေက မင်းတို.လို အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်မရှိဘူး၊ မင်းတို.လို ယုတ်မာတဲ့စိတ်မရှိဘူး
မအေလိုးတွေ သူခိုးက လူပြန်ဟစ်ချင်သေးတယ်
ရှေးမြန်မာ မင်းကောင်း မင်းမြတ်များရဲ့ ခြေရာကို နင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနေတာ ကမ္ဘာသိပါ၊ အဆိုးမြင်နေသူတွေကသာ
မုဒိတာမပွားနိုင်ဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒီလူတွေဟာ သစ္စာဖောက်တွေ၊ အမျိုးပျောက်နေသူတွေ၊ ဇာတ်ပျက် နေသူတွေဖြစ်လို့အိုးနင်းခွက်နင်း စည်းဝါးမညီ တေးသွားလည်း မပီကြတော့ပါ။
တိုင်းပြည်အတွက် ရွှေလမ်း ငွေလမ်းဖောက်နေတာကို
၀မ်းမမြောက်နိုင်သူတွေအားလုံးဟာ လူဖြစ်ရကျိုးလည်း မနပ်တော့ပါ။
တော်တော် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ပဲ
မင်းကောင်းမင်းမြတ်များရဲ. ခြေရာကိုနင်းတယ် ဟုတ်လား
ပြည်သူထောင်နဲ.ချီကို သေနတ်နဲ.ပစ်သတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ ခွက်ခွက်လန်ရှုံးတာတောင် စောက်ရှက်မရှိ အာဏာကို သေနတ်ကိုင်ပြီး
စောက်ရှက်မရှိတဲ.မျက်ခွက်တွေနဲ. အာဏာကို ဓါးပြ တိုက်ယူထားပြီး တိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ ၀င်ငွေမှန်သမျှကို စောက်ရှက်မရှိ ခိုးစားနေတဲ့
အောက်တန်းအကျဆုံး သူခိုးဓါးပြတွေကများ သူတို.ကိုသူတို. မင်းကောင်းမင်းမြတ်တဲ့လား
ကမ္ဘာသိတာကတော့ မတရားမှုကြီးစိုးနေသော မြန်မာနိုင်ငံပဲ၊ နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေရဲ. အလှူငွေ ပစ္စည်းတွေကိုတောင်
စောက်ရှက်မရှိ လူမဆန်စွာ မြိုဆို.ရက်တဲ့ အောက်တန်းအကျဆုံး လက်နက်ကိုင်ဓါးပြအုပ်စုပဲ
သစ္စာဖေါက်ဆိုတာ လက်နက်မဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းသား မိန်းမ ကလေးပါမကျန် ကိုယ့်လူမျိုးကို ပစ်သတ်နေတဲ့ မင်းတို.ပဲ
အမျိုးပျောက်နေသူတွေဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ဒုက္ခသည်ပါးစပ်ထဲက ထမင်းပါမကျန် ခိုးစားတဲ့လူမျိုးပါလားလို. ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်ပြနေတဲ့ မင်းတို.ပဲ
ဇာတ်ပျက်နေသူတွေဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စစ်သားပါလို. online မှာတောင် မကြေညာရဲတဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာကို မှန်ထဲတောင်ရဲရဲ မကြည်.ရဲတဲ့ မင်းတို.ပဲ
တိုင်းပြည်ငွေ ခိုးမစားတဲ့ သမာအာဇီဝ နည်းလမ်းနဲ.ရှာစားတဲ့ ဘုန်းကြီးမသတ်တဲ့ တို.ပြည်သူတွေသာ လူဖြစ်ကျိုးနပ်သူတွေပါ
စောက်ရှက်မရှိခိုးစား တိုက်စားနေတဲ့ ဘုန်းကြီးပါမကျန် သတ်နေတဲ့ မင်းတို.သာ လူဖြစ်ကျိုးမနပ်သူတွေပါ
အဆိုး အကောင်း ဆိုတာ ပိုက်ဆံ ပေါ်က ခေါင်းနဲ့ပန်းလို ၅၀-၅၀ ရာ နှုန်း ဆိုရင်တောင် တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ အဲ အဆိုးက ၉၀ အကောင်းက ၁၀ လောက်ပဲ ဆိုရင် တခုခုတော့ မှားနေတာသေချာနေပြီပေါ့။
အော် နေစရာ စားစရာမရှိ လို့ မစင် အိုင်ထဲ နေရတဲ့ဝက် က မစင်သည်သာ အာဟာရ အရှိဆုံး၊ မစင်နံ့ သည်သာ လောကမှာ အမွှေးဆုံး ဆိုပြီး ကြွေးကြော်နေ သလိုပါလား၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်ဘဝ ရောက်နေမှန်းမသိ၊
ကျပ်မပြည့်ဘူးပြောတော့လဲမကြိုက်။ မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်မရှိဘူးတဲ့၊ အော်နေသေးသဗျ။
ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့တောင်ကောင်းနေပြီ။ Maung ဆိုတဲ့ လူ ကျပ်မပြည့်လွန်းတာ ကို သနားလည်း သနား၊ ဟီး ဟီး မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင် မရှိဘူးဆိုတာကို သဘောလည်းကျ လွန်းလို့ ရေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
ခင်ဗျားဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက အင်္ဂလိပ်လို ဆို delusion လို့ ခေါ်သဗျ၊ အဲ့ဒီကနေ ရင့်သွားလို့ ရှိရင် psychosis ဝင်သွားတတ်တယ်ဗျို့၊ အဓိပ္ပါယ် သိချင်ရင်တော့ dictionary ထဲသာ သွားကြည့် ပေ တော့၊ စေတနာနဲ့ အပြုသဘော သတိပေးလိုက်တာပါဗျို့။
သြော် Maung ဆိုတဲ့လူ၊ သွားပြီးပြောမိ တာကို က ကိုယ့်အမှားပါ၊ လူကောင်းပကတိ ကျပ်ပြည့်တယ်အောက်မေ့လို့၊
(တပ်မတော်တိုင်းမှာ စားဝတ်နေရး ခက်ခဲတယ်) ဆိုတော့ နိုင်ငံတိုင်းက စစ်သားတွေ အုတ်ဖုတ်တာတို့၊ ကယ်ရီရိုက်တာတို့၊ နှစ်လုံးထီရောင်းစားတာတို့ လုပ်နေရမှာ ပေါ့နော်။ အရာရှိတွေလည်း အိမ်နောက်ဖေးက ဗူးသီး ဘယ်နေ့သီးမလဲ မျှော်နေရမှာပေါ့ ဟုတ်လား။ ဒါက မြန်မာပြည်မှာ တခါတရံတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ကျုပ်မွေးကတည်းက တပ်ထဲက အရာရှိတွေ လူမွှေးမပြောင်တာ အခုပိုတောင်ဆိုးသေးသဗျ။
ပြောသေးတယ် မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်မရှိတဲ့၊ ဟီး ရယ်ရလွန်းလို့ ဗိုက်တောင်နာတယ်၊ ....
ဒီလိုတပ်မတော်မှာ စစ်သားအများစုဟာနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့လခနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ၊မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံအ
တွက်ပေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတာ၊ ဒါတွေကိုသိရက်နဲ့ ခုစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေ တပ်မတော်အတွက် လိုအပ်လို ငွေသုံးရင် စဉ်းခြငိတုံတရားမရှိ.. နအဖကိုစောက်ပစ်ရှာပြီပြောရရင်ပြီးရော ဆိုပြီအမိူးသားရေးစိတ်ဓါတ်မရှိ နိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့ငွေကိုနိုင်ငံကိုအုပ်ခုပ်တဲ့ အစိုးရကမှမသုံးရင်ဘယ်သူကသုံးမလဲ။
တပ်မတော် ကလွဲပြီ သုံးတာကိုမှ
နိူင်ငံတော်အတွက် သုံးနေတာလို မင်းတို့ကယူဆနေတာလား။ တော်တော်ကို စိတ်ဓါတ်ကကျည်းမြောင်းပြီ အစွဲကြီး၊ စိတ်ခံစားမုနဲ့ထင်ရာလျောက်အော်နေတာပဲ။ နိုင်ငံတော်က၀င်ငွေတွေ မှန်သမျ မင်းတို့အဖေ ဦးသန်းရွေ လက်ထဲရောက်သွားတယ်
ထင်မနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့ငွေ. အဲဒီဝင်ငွေကိုဘယ်လိုသုံးသုံး အစိုးရရဲ့အလုပ်..အမိူးသားအကိုးစိးပွား
ခုအုပ်ခုပ်နေတာစစ်အစိုးရ.. transparacy ရှိရမယ်ဘာတေညာတွေ လျောက်အော်မနေနဲ့.. စာလာဖတ်မနေနဲ့.. နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အုပ်ခုပ်မူကိုပဲရမယ်. နိုင်ငံအတွက်အကိူးရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ ကိုယ်လူမိူးစစ်စစ်တွေတိုင်းပြည်အုပ်ခုပိနိူင်ခွင့်ရှိဖို့
ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးပြောလိုက်ဦးမယိ. ဘယ်လိုနညိးနဲ့ချမ်းသာချမ်းသာ.. အဲဒီချမ်းသာလာတဲ့လူတွေကို အုပ်ခုပ်သူ
အစိုးရက နိုင်အတွက်ပြန်ပြီး အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယိ။
စစ်သူခိုးကြီးတွေက ပြောတယ် သူတို. ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ချမ်းသာချမ်းသာ အာဏာယူထါးယူထါး တရားတယ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်လို. မြန်မာတွေကို ကြိုက်တာ လုပ်လို.ရသတဲ့ .....
ဒါနဲ့ပဲ ငါလဲ သိံညာရွှေ ကို ငါ ဗမါစစ်စစ်ကွ လုပ်ခြင်တာလုပ် လို.ရတယ်-လုပ်တယ်ကွာ-ဆိုပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ် လုပ်ပေးလိုက်တာ ကောင်မကြီး လင်မပြနိုင်ဘဲ ဗိုက်ထွက်သွား လို.ဟီးဟီး.. ဇော်ဖြိုးဝင်းဆိုတဲ့ နွားလေးဆွဲ ထုတ်လာလိုက်ရတယ်.. ကျန်တဲ့ သန်းရွှေသမီးတွေလဲ သတိထါးနေကြ ငါ့လို ဗမါစစ်စစ် ဆိုရင် နင်တို.ကို ကြိုက်သလို လုပ်လို.ရတယ်.. မှတ်ထါး ။ condom မပါဘဲ ဆော်ပြမယ်။